အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်း နှင့် လှကလျာ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – နတ်သား
လေတဟူးဟူး တိုက်ခတ်နေသည်။ မိုးကလည်း တဖွဲဖွဲ ရွာသွန်းနေ၏။ တိုက်ခတ်လာသော လေနှင့်အတူ မိုးသီးမိုးပေါက်များက ကြီးမားပြင်းထန်လှသည်။ မိုးသီးမိုးပေါက်များ သစ်ရွက်ပေါ်သို့ ကြွေကျသည့် အသံသည် တဖောက်ဖောက်နှင့် ကျယ်လောင်လှ၏။ လေကကြမ်းကြမ်းတိုက်လေ မိုးသီးမိုးပေါက်များက ပြင်းထန်လေဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် လူတစ်ယောက်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ကျောတွင်ပိုး၍ မိုးထဲရေထဲ၌ သွားလာလှုပ်ရှားနေလေသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ထိုသူသည် ယောကျာ်းရင့်မာကြီးတစ်ဦး မဟုတ်ဘဲ အသက်ငယ်ရွယ်သော မိန်းကလေးတစ်ဦး ဖြစ်နေခြင်းပင်။ သူမ၏ နောက်ကျောတွင် အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကို လွယ်ပိုးထားသည်။ ထိုအထုပ်ကြီးသည် အလတ်စား အရက်အိုးများပင် ဖြစ်တော့သည်။
မိုးထဲလေထဲ၌ သူမအဖို့ မနားနိုင်ပါ။ လေထန် မိုးထန်နေသည်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်အားပါ။ ထိုအရက်အိုးများကို တစ်စုံတစ်ယောက်ထံ အချိန်မီရောက်ဖို့သာ အရေးကြီးနေပေသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးသည် မမောနိုင်မပန်းနိုင် တောင်ပေါ်သို့ အပြေးအလွှား တက်နေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဦးသက္ကသည် တဲအတွင်း၌ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေသည်။ သူ၏ မျက်စိအစုံသည် မကြာခဏ အပြင်ဘက်သို့ လှမ်းကြည့်နေသည်။ မိုးရေစက်တို့သည် တံစက်မြိတ်အောက်မှ သွယ်တန်း၍ ကျနေသည်။ ဦးသက္ကသည် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စောင့်မျှော်လှမ်းကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရပါ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် တဲအတွင်းသို့ အပြေးအလွှား ဝင်ရောက်လာလေသည်။ ဦးသက္ကသည် မိန်းကလေးကို ကြည့်ရင်းမှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားသလို ခေါင်းခါရမ်းလိုက်သည်။
”တကယ်တော့ နင့်ကို ငါ မခိုင်းသင့်ပါဘူး”
မိန်းကလေးက ဦးသက္ကကို မော့ကြည့်ရင်း မျက်နှာထက်မှ မိုးရေစက်တို့ကို လက်ဝါးနှင့် သတ်ချလိုက်လေသည်။
”နင်ဘာ့ကြောင့် ကြာနေတယ်ဆိုတာ ငါဗေဒင် မမေးပဲ ရိပ်စားမိသွားပြီ”
ဦးသက္ကသည် ထိုသို့ပြောပြီးသည်နှင့် မိန်းကလေး ယူလာသော အရက်အိုးများကို သူ့အခန်းထဲသို့ ဆွဲယူသွားလေသည်။ မိန်းကလေးကလည်း အဝတ်အစားများကို လဲလှယ်ရန် သူမ၏ အခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားလေသည်။
ဦးသက္ကသည် သူဖော်စပ်ထားသော ဆေးများနှင့် မိန်းကလေး ယူလာသော အရက်များကို ရောစပ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် သူသည် ခွက်ကြီးတစ်လုံးထဲသို့ထည့်ကာ လက်နှစ်ဖက်နှင့် စုံကိုင်၍ မော့ချလိုက်လေသည်။
ဦးသက္ကသည် လူငယ်တစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ အသက်အားဖြင့် ခြောက်ဆယ်ကျော်နေပြီဖြစ်သော လူကြီးတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် လူငယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ပင် သန်မာဖျတ်လတ်ဆဲပင် ရှိနေသေး၏။ ကျန်းမာရေး အလွန်ကောင်းသော လူကြီးတစ်ယောက်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပေသည်။
ဦးသက္ကတွင် ဆေးကောင်းတစ်လက် ရရှိထားပေသည်။ ထိုဆေးမှာ စောစောက အရက်နှင့် ရောစပ်လိုက်သော ဆေးတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပေသည်။ အရက်နှင့်ရောစပ်ထားသော ထိုဆေးများကို ဦးသက္ကက ရေသောက်သလို သောက်ချလိုက်သော်လည်း ဘေးမဖြစ်ပါ။
ထိုဆေးအာနိသင်သည် အရက်နှင့် ရောစပ်လိုက်ပါမှ ပို၍ သွေးလေညီညွတ်သွားသည်ဟု ဦးသက္ကက ယုံကြည်ထားလေသည်။ ဦးသက္ကသည် ထိုဆေးကိုတစ်ဝကြီး သောက်ပြီးသည်နှင့် ပြတင်းပေါက်တံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အခန်းထဲဝင်သွားသော မိန်းကလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
” ရှင် ဆရာ..”
” မိုးအေးတုန်း ခဏလောက် လာကူညီပါဦးကွယ်”
” အေးတယ်ဆိုပေမဲ့ အင်္ကျီလေး ချွတ်လိုက်ပါလား ကလျာ”
ဦးသက္ကအသံက မတင်းမာသော်လည်း အမိန့်သံ ဆန်နေသည်။ ကလျာဆိုသော မိန်းမပျိုလေးကလည်း စကားဆုံးသည်နှင့် မဆိုင်းမတွပင် သူမ၏ သိုင်းဝတ်စုံကို ချွတ်ခွာချလိုက်သည်။ သိုင်းဝတ်စုံ ကျွတ်အကျတွင်တော့ ဖြူဖွေးနူးညံ့လှသော ရင်နှစ်မွှာက အတားအဆီးမရှိ ပေါ်လာသည်။
ဦးသက္ကဆိုသော လူကြီးသည် အသက်ရှူမှားမတတ်ပင် လှပလွန်းနေသော ရင်သားဖွေးဖွေးတစ်စုံကို ငေးကြည့်မိသည်။ ထို့နောက် သူစိတ်တွေ ကြွလာသည်ထင့် ။ သူဝတ်ထားသော သိုင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ သိုင်းဘောင်းဘီအောက်မှ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် အကြောပြိုင်းပြိုင်း ဖြစ်နေသော လိင်တန်ကြီးက တရမ်းရမ်းနှင့် ပေါ်ထွက်လာသည်။
” ကလျာ …. ဒီနားလာ။ စုပ်ပေးပါဦးကွယ်။ ”
မိန်းမချောလေးလည်း တင်းမာပြီး ဖောင်းကားနေသော လိင်တန်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ပြီး စတင်စုပ်ပေးတော့သည်။ ပထမဆုံးဒစ်ကို ပါးစပ်ဟ၍ ငုံစုပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အရင်းမှအဖျားသို့ လျှာလေးနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း လျက်သည်။ ထို့နောက် သူကိုယ်တိုင်ပင် စိတ်ကြွလာပြီး ခေါင်းကို ငုံ့လိုက်ကြွလိုက်ဖြင့် အားရပါးရ စုပ်ပေးတော့သည်။
”အား…… ရှူး ……….. ကောင်းလိုက်တာ ကလျာရယ် ”
ဦးသက္ကထံမှ ညည်းညူသံများပင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်
”ကလျာ…. တော်တော့ကွယ်…. လုပ်ကြရအောင်”
မိန်းကလေးသည် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သိနေသည့်အလား အလိုအလျောက်ပင် အနားရှိနေသော စားပွဲခုံပေါ်သို့ လက်ထောက်ကာ ဖင်ကို ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ဖြူဖွေးနူးညံ့ပြီး ဖောင်းအိနေသည့် အဖုတ်ကြီးက ပေါ်ထွက်လာသည်။ အဖုတ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အရည်လေးတွေ ထွက်နေကြောင်း ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်တွင် အရောင်တစ်လက်လက် ထွက်နေခြင်းက သက်သေခံနေသည်။
ဦးသက္ကသည် ကလျာ၏ တံတွေးများဖြင့် စိုစွတ်ကာ ပြောင်လက်နေသော သူ့လိင်တန်ကြီးကို ကလျာ၏ အဖုတ်လေးထဲသို့ တစ်ရစ်ချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ လိင်တန်ကြီးက တင်းကြပ်နေသော အဖုတ်လေးအတွင်းသို့ တစ်ရစ်ချင်း တိုးဝင်သွားသည်။ စင်စစ် ကလျာ၏ အဖုတ်က မသေးပါ။ သို့ရာတွင် ဦးသက္က၏ လိင်တန်ကြီးနှင့် ယှဉ်လိုက်သောအခါ ကလျာ၏ အဖုတ်လေးမှာ လွန်စွာ သေးငယ်သွားသည်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။
ဦးသက္ကသည် မျက်လုံးကို မှေးရင်း ကလျာ အဖုတ်မှ ပေးစွမ်းသော နူးညံ့ကာ ကြပ်သိပ်နေသည့် အရသာကို ခံစားနေသည်။ ဆယ့်ငါးချက်ခန့် အသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ ဦးသက္ကသည် သူ၏လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ခပ်မြန်မြန်လေး လိုးနေမိသည်။ ကလျာလည်း ဦးသက္က၏ ကြီးမားပြည့်ကြပ်သည့် လီးကြီး၏ အရသာကြောင့်ဖင်လေးကိုကော့ကာ ကော့ကာနှင့် နောက်ကို ပစ်ပစ်ပေးနေမိသည်။ ထို့နောက် ဦးသက္ကသည် ကလျာ၏ခါးကို စုံကိုင်ကာ အားရပါးရပင် လိုးတော့သည်။ အချက်ငါးဆယ်ခန့် လုပ်ပြီးသောအခါ ကလျာထံမှ အသံရှည်ညည်းသံနှင့်အတူ အရည်လေးများ ပိုမိုစိုစွတ်ကာ ကလျာတစ်ယောက် ငြိမ်ကျသွားသည်ကို သိလိုက်ရသည်။
ကလျာတစ်ယောက် ပြီးသွားပေမဲ့ ဦးသက္ကကတော့ မပြီးသေးပေ။ စောစောက အရက်နှင့် ရောသောက်ထားသော သူ၏ ဆေးအစွမ်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အသက်ခြောက်ဆယ် ကျော်နေသော်လည်း မြေးအရွယ်သာရှိသော ကောင်မလေးကို အားရပါးရပင် လိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကလျာ ပြီးသွားရင် အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်ကွယ်။”
ကလျာလည်း မညည်းမညူပင် အိပ်ခန်းထဲသို့ဦးဆောင်၍ ဝင်သွားလိုက်သည်။ အိပ်ခန်းဆိုသော်လည်း တဲအတွင်းမှ အကာအရံရှိသော အခန်းလေးသာ ဖြစ်သည်။ ထိုအခန်းထောင့်တွင် တစ်ယောက်အိပ် ကုတင်လေး တစ်လုံးရှိသည်။ ဦးသက္ကသည် ကလျာကို ကုတင်လေးပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုမကာ လက်နှင့် ထိန်းကိုင်ထားခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှ အမွှေးရေးရေးသာ ပေါက်နေသော အဖုတ်ကြီးက ပေါ်လာသည်။
ဦးသက္ကလည်း ကလျာ၏ အဖုတ်ကြီးကို မြင်သည်နှင့် တစ်ရှုးရှုးနှာမှုတ်သံပြုကာ အတင်းပင် တက်လိုးတော့သည်။ ပြင်းထန်သော ဆောင့်ချက်များကြောင့် ကလျာ၏ မျက်နှာလေးမှာ ရှုံ့မဲ့နေသည်။ သို့ရာတွင် အနည်းငယ်အောင့်သော ဝေဒနာနောက်တွင် ဦးသက္က၏ လီးကြီးမှ ပေးစွမ်းသော ကာမအရသာကိုလည်း ရရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် သူမ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ တအီးအီး ညီးညူသံလေးများပင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဦးသက္ကလည်း ကလျာ၏ နုနယ်သော ရင်နှစ်မွှာကို အကြောပြိုင်းပြိုင်း ကျနေသော လက်ကြီးဖြင့် အားကုန်ဆွဲကိုင်ကာ တဖုန်းဖုန်း မြည်အောင်ပင် ဆောင့်လိုးတော့သည်။
အတန်ကြာ ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကလျာတစ်ယောက် ကော့တက်သွားပြီး ကာမ ပန်းတိုင်ကို နောက်တစ်ကြိမ် တက်လှမ်းသွားသည်။ ကလျာ၏ အဖုတ်အတွင်းသားများမှ တရစ်ရစ် စုပ်ဆွဲသောကြောင့် ဦးသက္ကလည်း ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကလျာ၏ အဖုတ်လေးထဲသို့ သူ၏လရည်များကို အားရပါးရ ပန်းထုတ်လိုက်တော့၏။ ထို့နောက် ဦးသက္ကသည် သူ၏လီးကို အဖုတ်ထဲမှာအတန်ကြာအောင် စိမ်ထားပြီး ဇိမ်ယူနေသည်။ ဇိမ်ယူလို့ဝမှ ဦးသက္ကတစ်ယောက် ဘာမှမပြောပဲ သူ၏ လီးကြီးကို ကလျာအဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်ကာ အခန်းအပြင်သို့ ပြန်ထွက်သွားလေသည်။
ကလျာလည်း အဖုတ်ထဲမှ စီးကျလာသော သုတ်ရည်များနှင့် သူမ၏ အရည်များကို အဝတ်တစ်ခုဖြင့် သုတ်လိုက်ပြီး အဖုတ်ကို ရေဆေးရန် တဲနောက်သို့ ထွက်သွားလေသည်။
ဦးသက္ကသည် ကလျာ ထွက်သွားသောအခါ ပြတင်းပေါက်တံခါးကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး မိုးသီးမိုးပေါက်များကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ သို့သော် သူ၏ မျက်စိထဲတွင် လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်က မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသာ မြင်ယောင်နေမိတော့သည်။
ဦးသက္ကသည် ထိပ်တန်း သိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူသည် သိုင်းလောက၌ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး ကျက်စားလာခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်လုံးလုံးလည်း သူ၏ နာမည်သည် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျော်ကြားလာသည်ကို ဦးသက္ကက လုံးဝမလိုလားပါ။ သိုင်းလောက၌ ကျော်ကြားမှုများလာလျှင် ရန်ငြိုးရန်စများသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း များလာသည်ဟု သူယုံကြည်ထား၏။ ထို့ကြောင့် သူသည် သိုင်းလောကကို လုံးဝစွန့်လွှတ်၍ ဆေးဝါးများ ဖော်စပ်သည့် ပညာကို လိုက်စားခဲ့လေသည်။
ဦးသက္ကသည် တောင်ပေါ်တွင် တဲတစ်လုံးဆောက်၍ ဆေးဝါးများရှာကြံကာ ဖော်စပ်ပြီး ရောင်းချစားသောက်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ ဦးသက္က တောင်ပေါ်မှဆင်းလာစဉ် ချောက်ကမ်းပါး တစ်ခုပေါ်၌ ရပ်တန့်နေသော မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ဦးသက္ကက ထိုမိန်းကလေးကို အကဲခတ်ကြည့်ရှုနေသော်လည်း ယင်းမိန်းကလေးက သူ့အား မမြင်ပါ။ သူမသည် ပါးစပ်က တစ်စုံတစ်ခုကို ရေရွတ်နေသည်။ ထို့နောက် မျက်စိစုံမှိတ်ကာ နက်ရှိုင်းသော ချောက်ကမ်းပါးထဲသို့ ခုန်ချလိုက်လေသည်။
မိန်းကလေး၏ အကြံ မအောင်မြင်ပါ။ ဦးသက္ကသည် မိန်းကလေး၏ လက်မောင်းကို အမိအရ ဖမ်းဆွဲထားလိုက်လေသည်။ မိန်းကလေးသည် ဦးသက္ကကို ရုတ်တရက် လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ကြူကြူပါအောင် ငိုရှိုက်လေတော့သည်။ ဦးသက္ကသည် မိန်းကလေး ငိုယိုနေသည်ကို လုံးဝမတားပါ။
” ငိုလိုက်… ဝအောင် ငိုချလိုက် ”
ဦးသက္ကက ထိုကဲ့သို့ပြော၍ မိန်းကလေး၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေပေသည်။ အတန်ကြာတော့ မိန်းကလေးသည် အငိုရပ်သွားပြီး ဦးသက္ကကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။
”ကျွန်မ သေချင်တာကို ဘဘက ဘာလို့ တားရတာလဲ။”
”မဟုတ်သေးဘူးလေ၊ လူ့ဘဝဆိုတာ အင်မတန်ရခဲတယ်။ ဘာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်ရတာလဲ။”
မိန်းကလေးသည် အံကို တင်းတင်းကြိတ်ထားလေသည်။ သူမ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် နာကြည်းမှု ၊ ကြေကွဲမှု ၊ ဝမ်းနည်းမှု အရိပ်အယောင်များက အပြည့်ရှိနေသည်။
” လာ……. မိန်းကလေး ဘဘနဲ့ လိုက်ခဲ့။ ”
ဦးသက္ကက ချော့မော့၍ ခေါ်လိုက်သည်။ မိန်းကလေးက ခေါင်းခါရမ်းလိုက်၏။
” ဟင့်အင်း … ကျွန်မ မလိုက်ဘူး၊ ကျွန်မဘဝဟာ လူ့လောကမှာ နေဖို့လည်း မကောင်းတော့ဘူး။ ”
” အကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတာပါ။ ခုမကောင်းပေမယ့် တစ်နေ့ ကောင်းလာမှာပေါ့ မိန်းကလေးရယ်။”
မိန်းကလေးက မဲ့ပြုံး ပြုံးလိုက်လေသည်။ ဦးသက္ကသည် မိန်းကလေးကို သေချာစွာ အကဲခတ်ကြည့်မိသည်။ သူမ၏ အသက်မှာ နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်သာ ရှိဦးမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ရုပ်ရည်မှာ ချောမောပြေပြစ်မှုရှိသည်။ စင်ရော်တောင်မျက်ခုံး ၊ နှာတံပေါ်ပေါ် ၊ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးမှာ ယခုအခါ စိတ်ဆင်းရဲ ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဒဏ်ကြောင့် ဖြူဖျော့နေသည်။ သိုင်းဝတ်စုံအောက်က မို့မောက်သော ရင်နှစ်မွှာ နှင့် စွင့်ကားသော တင်သားများကို မြင်ရသည်။
ဦးသက္ကသည် မိန်းကလေးကိုကြည့်၍ စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်သွားသည်။ ဘယ်နည်းနှင့်မဆို ထိုမိန်းကလေး၏ အသက်ကိုတော့ ကယ်ဆယ်ထားမှ ဖြစ်တော့မည်ဟုလည်း စိတ်ထဲမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်တော့သည်။
ကလျာသည် ဦးသက္ကကို အတန်ကြာ ငေးကြည့်နေပြီးမှ
ဦးသက္က၏ မျက်ခုံးနှစ်ခုက အပေါ်သို့ မြင့်တက်သွားသည်။
”အို….. ရှမ်းပြည်နယ် ဆိုတာ အဝေးကြီးပဲ ၊ ဘယ့်နှယ် ဒီကို ရောက်လာရတာလဲ။ ”
ကလျာဆက်၍ ငိုပြန်သည်။ ဦးသက္ကသည် သူမ စိတ်ဆင်းရဲမည်စိုး၍ ဘာမှ ဆက်မမေးတော့ပေ။
”ကဲ …. ကလျာ … အဘနဲ့လိုက်ခဲ့ ၊ တစ်နေ့ သမီးဘဝ ပျော်သွားမှာပါ။”
ဦးသက္ကက ပြုံး၍ ခေါင်းကို ခါရမ်းလိုက်လေသည်။
”ဘဘက မိုးကောင်းမြို့က မဟုတ်ပါဘူး၊ ဟိုးတောင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ နေတာပါ။”
ကလျာသည် ဦးသက္ကကို အတန်ကြာအောင် ငေးစိုက်ကြည့်၏။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေသော အဘိုးအို ဦးသက္ကကို မယုံ၍တော့ မဟုတ်ပါ။ သူမစိတ်ထဲတွင် ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှ မဆက်ဆံချင်တော့သည့် အသွင်မျိုး ဖြစ်နေသည်။
”ဘာလဲ …. သမီးက အဘကို မယုံလို့လား။”
” ဘဘက သိုင်းပညာရှင် တစ်ယောက်လား ”
” ဘဘက သိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ လိုက်ခဲ့မယ်။ ”
”ဟင် …. ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ”
ဦးသက္က တအံ့တသြ ဖြစ်သွားသလို ပြန်မေးလိုက်၏။
”ကျွန်မ သိုင်းပညာသင်ချင်လို့ ”
ဦးသက္ကသည် ကလျာ စိတ်ချမ်းသာစေရန်အတွက် သိုင်းပညာကို သင်ကြားပေးရသည်။ ပထမတော့ အခြေခံလောက်သာခသင်ပေးမည်ဟု စိတ်ကူးထားသော်လည်း ကလျာကိုယ်တိုင်က လက်စားချေရန်စိတ်အားထက်သန်သောကြောင့် အကုန်အစင်ပင်သင်ကြားပေးလိုက်သည်။ မိမိတတ်ကျွမ်းခဲ့သော သိုင်းပညာများသာမက အသစ်တီထွင်ထားသောသိုင်းကွက်ဆန်းများကိုပါ သင်ကြားပေးလိုက်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ သင်ကြားပေးနေရင်းမှ သူမ၏ အတိတ်အကြောင်းများကို မေးမြန်းသော်လည်း ကလျာသည် ယနေ့ထက်တိုင် ဦးသက္ကအား မပြောပြပါပေ။ ဦးသက္ကအနေနှင့် တိတိကျကျ သိထားသည်မှာ ကလျာသည် ယောက်ျားများကို အတော်နာကြည်းနေပုံရသည်။
ကလျာသည် တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြန်လည် လက်စားချေလိမ့်မည်ဟုလည်း ထင်မှတ်နေသည်။ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်သည်လည်း ယောကျ်ားဖြစ်ရမည်ဟု ဦးသက္ကက ထင်ထား၏။ ကလျာအား မိမိသိုင်းပညာ သင်ကြားပေးမိသည်မှာ အမှားတစ်ခုကို ပြုလုပ်မိပြီလားဟုလည်း ဦးသက္က တွေးတောနေမိသည်။ မိုးသည် သဲသဲမဲမဲ ရွာသွန်းနေဆဲပင် ရှိနေသည်။ ဦးသက္ကသည် သူ၏ အတွေးများကို ရပ်တန့်လိုက်၏။
ကလျာသည် ဦးသက္က၏ သုက်ရည်များနှင့် ပေကျံနေသော အဖုတ်ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ရင်း တွေးတောနေမိသည်။ မိမိသည် ယောက်ျားများကို အနာကြီး နာကျည်းနေသူ ဖြစ်သည်။ ယောကျ်ားများသည် သူတို့ ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့သာ ရှေ့တန်းတင်ထားသည်ဟု တွေးမိသည်။ ယခုလည်းကြည့် ဦးသက္ကသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ စားဝတ်နေရေးတင်မက သူတတ်ကျွမ်းထားသော သိုင်းပညာများကိုလည်း မချွင်းမချန် သင်ပေးသည်။ သို့သော် သူ၏ ခန္ဒာကိုယ် အသွေးအသားကို ပြန်လည်ပေးဆပ်နေရသည်။ သူမ ငြင်းပယ်မည်ဆိုလျှင် ငြင်းပယ်နိုင်ပေသည်။ သို့သော် သူမကိုယ်တိုင်ကပင် လိုလိုချင်ချင်နှင့် ဦးသက္က၏ အသုံးတော်ခံနေမိခြင်းကို တွေးတောလို့မရပေ။ အတွေးစများက ဦးသက္ကသူမကို ပထမဆုံးလာရောက် ကာမစပ်ယှက်သော အချိန်သို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။
ရောက်လာတာ တစ်လလောက်ကြာတော့ သူမရေချိုးပြီး ပြန်လာသည့် အချိန်တွင် ဦးသက္က၏ မျက်လုံးများက သူမရင်သားတစ်ဝိုက်တွင် ရစ်ဝဲနေတာ သတိထားမိသည်။ နံနက်ခင်း သိုင်းသင်တုန်းကလည်း ဓားကွက်တွေကို အနီးကပ်ပြရင်း သူမတင်ပါးသို့ ဦးသက္က၏ ပေါင်ကြားမှ အချောင်းကြီးတစ်ချောင်း လာလာထောက်မိတာကို သိသည်။ကလျာလည်း ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ ဘာမှမပြောပဲ
သိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ ကလျာတစ်ယောက် တောထဲရှိ စမ်းချောင်းလေးထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပင် ရေချိုးမိသည်။ တစ်မနက်လုံး သိုင်းလေ့ကျင့်ရတာ ပင်ပန်းလှသည်။ ကလျာတို့လို ဖြူဖြူနုနု မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သော လူသတ်သိုင်းပညာကို လေ့ကျင့်ရသည်မှာ မလွယ်ကူလှပေ။ သို့ရာတွင် ရန်သူတော်များကို လက်စားခြေလိုသောကြောင့်သာ မဆုတ်မနစ် သင်ကြားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်မနက်လုံး ပင်ပန်းခဲ့သမျှ စမ်းရေ အေးအေးကြောင့် လန်းဆန်းသွားသည်။
ရေချိုးရင်း ရင်သားနှစ်မွှာကို ပွတ်သတ်ကာ ဆေးကြောသည်။ ကျောပြင်ကို ပွတ်သတ်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး ချိုးမိသည်။ တောကြီးမျက်မည်းအတွင်းမှ စမ်းချောင်းလေး ဖြစ်သောကြောင့် ချောင်းကြည့်မည့် လူရှိမှာကို မပူရပေ။ ထို့နောက် ထဘီကို ပေါင်ရင်းထိ ဆွဲတင်ပြီး ဝင်းမွတ်နေသော ပေါင်တန်များကို ပွတ်သတ်ကာ ရေချိုးသည်။ ထို့နောက် ပေါင်ရင်းကို လက်တစ်ဖက်က ပွတ်သတ်ရင်း အဖုတ်ကလေးကို ပွတ်တိုက် ဆေးကြောသည်။
အဖုတ်ကိုပွတ်ရင်း မိမိ၏ အပျိုဘဝလေး လူယုတ်မာ တစ်ယောက်ကြောင့် ညစ်နွမ်းခဲ့တာကို ပြန်တွေးမိသည်။ ထိုအကြောင်းများကို တွေးမိပါက လူသတ်ချင်စိတ်များ ပေါ်လာသောကြောင့် အတွေးစများကို ဖြတ်တောက်ပြီး ကမ်းပေါ်သို့တက်ကာ ရေစိုထဘီကို ခြေရင်းထိပုံချပြီး ရေလဲထမိန်နှင့် လဲလိုက်သည်။ ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်ကာ ပြည့်တင်းနေသော ရင်နှစ်မွှာ ၊ မို့ဖောင်းနေသော အဖုတ်အိအိလေးနှင့် စင်း၍သွယ်လျှနေသော ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းတို့ ၏ အလှသည် ပေါ်သွားသည်။
ထိုအချိန်တွင် သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်၏ နောက်ကွယ်၌ လူတစ်ယောက် ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေကြောင်းကိုတော့ ကလျာ တစ်ယောက် မရိပ်မိခဲ့ပါပေ။ ထိုချောင်းမြောင်းနေသောသူသည် မည်သူနည်း။ တောကြီးမျက်မည်း အတွင်းတွင် လူနှစ်ယောက်သာ ရှိသောကြောင့် ကလျာကို ချောင်းကြည့်နေသူသည် ဦးသက္ကသာ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ရေချိုးပြီး ပြန်လာတော့ ကလျာတစ်ယောက် အခန်းထဲဝင်ကာ ရေများကို ပြောင်စင်အောင်သုတ်ပြီး သေတ္တာထဲမှ အဝတ်အစားများကို ထုတ်နေစဉ် လူတစ်ယောက် အခန်းထဲ ရုတ်တစ်ရက် ဝင်လာသည်။ ကလျာ ထမိန်ရင်လျားအပေါ်ဘက်မှ ပေါ်နေသော ရင်ဘတ်ပိုင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကွယ်ရင်း ဝင်လာသော သူကို ကြည့်လိုက်သည်။
”ဟင် …….. ဘဘ … ”
”သမီးရယ် ဘဘ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဘဘကို ခွင့်လွှတ်ပါတော့။”
စကားလည်းဆုံးရော မဆိုင်းမတွပင် ကလျာ့အနား ရောက်လာပြီး သွေးကြောပိတ်လိုက်သည်။ ကလျာတစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်လို့မရတော့ပဲ ထိုင်လျက် တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်သွားသည်။ ဦးသက္ကသည် ကလျာ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အနီးရှိ ကုတင်ပေါ်သို့ ချီမကာ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကလျာသည် သွေးကြောပိတ်ခံထားရသဖြင့် မည်သည့်စကားမျှပင် မဆိုနိုင်ပဲ ဦးသက္ကခေါ်ဆောင်ရာ ကုတင်ပေါ်သို့ ပုံ့ပုံ့လေး ပါသွားသည်။
ကုတင်ပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ ဦးသက္ကသည် စကားပြောနိုင်သော သွေးကြောကွက် နှင့် ခန္ဒာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း သွေးကြောကွက်တို့ကို ပိတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်အောင် သွေးကြောဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး ပြူကားထွက်လာသော အဖုတ်အိအိလေးကို ခေါင်းအပ်ကာ နမ်းတော့သည်။ အဖုတ်လေးမှာ ယခုမှ ရေချိုးသန့်စင်ထားသဖြင့် မွှေးကြိုင်သန့်ပြန့်နေသည်။
ဦးသက္ကသည် နမ်းရင်း အရှိန်ရလာပြီး အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို နေရာလပ်မကျန်အောင် သူ၏ လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် သိမ်း၍ ယက်တော့သည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကိုလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့် သကြားလုံးစုပ်သလို ဆွဲဆွဲစုပ်သည်။ ကလျာတစ်ယောက် သွေးကြောပိတ်ခံထားရလို့သာ တော်တော့သည်။ သွေးကြောပိတ်မခံထားရပါက ကောင်းလွန်း၍ အခုချက်ချင်း နာနာတက်လိုးပါတော့လို့ ပြောမိလောက်သည်။ ထိုသို့ပြောမိပါက မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အရှက်လုံးလုံး ကွဲတော့မည်။ မိမိအပေါ် သိုင်းလဲသင်ပေး ၊ ထမင်းလည်းကျွေး ၊ နေစရာလည်းပေးသော သူတစ်ယောက်က တဏှာကြီးသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟု ထင်သွားမည်ကို မခံလိုပေ။
အဖုတ်ယက်ယုံနှင့်ပင် ကလျာတစ်ယောက် နှစ်ချီတောင် ပြီးသွားသည်။ လူလည်း မျော့မျော့ပဲ ကျန်တော့သည်။ အဖုတ်တစ်ခုလုံးလည်း အရေတွေဖြင့် ရွှဲနစ်နေသည်။ ဦးသက္ကသည် သူ၏လီးကြီးကို တံတွေးအနည်းငယ် ဆွတ်လိုက်ပြီး အရည်တွေရွှဲကာ ဖောင်းအိနေသော ကလျာ၏ စောက်ဖုတ်ငယ်ငယ်လေးထဲသို့ ဒစ်မြုပ်ရုံ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။
အရည်တွေ ရွှဲနေသောကြောင့်သာ တော်တော့သည်။ တစ်ညသာ အလိုးခံဖူးသော ကလျာသည် ကာမဆက်ဆံခြင်း မပြုသည်မှာ လပိုင်းခန့် ကြာနေပြီ ဖြစ်သည်။ အဖုတ်လေးမှာ ကျဉ်းမြောင်းကာနေသည်။ ဦးသက္ကသည် ဒစ်ခေါင်းမြုပ်ရုံသာ သွင်းရသေးသော်လည်း တင်းကြပ်သော ခံစားမှုနှင့် နူးညံ့သော အထိအတွေ့တို့ကြောင့် အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ခါးကိုကော့ကာ အဖုတ်လေးထဲသို့ လီးကြီးကို တစ်ဆုံးထည့်လိုက်သည်။
အဖုတ်က တင်းကြပ်လှသောကြောင့် အတော်ပင် အားထည့်ကာ ဖိသွင်းလိုက်ရသည်။
ကလျာ စိတ်ထဲမှ အော်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြင်မှာ သွေးကြောပိတ်ခံထားရသောကြောင့် အသံမထွက်နိုင်ပါပေ။ ကလျာအဖုတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်ကာ ပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော် လီးကြီးက အဖုတ်နံရံတစ်ခုလုံးကို ထိထိမိမိ ပွတ်တိုက်သွားသောကြောင့် အရသာ ရှိလှသည်။ ဦးသက္က အဖုတ်ယက်ပေးစဉ်ကတည်းက နှစ်ချီပြီးခဲ့သော်လည်း အဖုတ်ထဲက ယားနေသည်။ ယခုလို တိတိကျကျ စောက်ဖုတ်နံရံတစ်ခုလုံးကို ပွတ်ဆွဲခံရသောအခါ အတော်လေးပင် အယားပြေသွားပြီး ခံလို့ကောင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်မှ မသိမသာ ဖင်ကိုကော့ကော့တင်ပေးသည်။
ဦးသက္ကလည်း အားဆေးအရှိန်နဲ့ ကလျာအဖုတ်လေးကို အားရပါးရပင် လိုးဆော်နေသည်။ ကလျာ့ထံမှ ငြင်းဆန်သော အမူအယာတို့ကို မတွေ့ရတော့ပေ။ ထို့ပြင် အောက်မှတင်ပါးကို ပင့်ပင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကလျာမရုန်းတော့ဟု ယူဆပြီး သွေးကြော ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကလျာကို ကုတင်စောင်းမှာ လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ စွင့်ကားဖြူဖွေးသော တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးကိုကြည့်ရင်း အားရပါးရဆောင့်သည်။ အဖုတ်ထဲမှ ညှစ်ညှစ် ပိုမိုညှစ်ဆွဲလာသောကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ် ကလျာအပြီးနှင့် ပြိုင်တူဖြစ်စေရန် စိတ်ကိုနှစ်ပြီး ဆောင့်တော့သည်။
ကလျာ့ထံမှ ” အား….. ရှူး…………. ” ဟူသော အော်သံရှည်နှင့်အတူ အဖုတ်ကလေးထဲသို့ လီးကို အဆုံးထိ ထိုးနှစ်ကာ အနှစ်နှစ် အလလက အောင်းထားသော သုတ်ရည်များကို ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
ခိုင်းထားသော ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် တောင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ မြို့ထဲသို့ သွားသော ကလျာ တော်တော်နှင့် ပြန်မလာပေ။ ဦးသက္ကတစ်ယောက် သူ့တပည့်မအပေါ် စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိသည်။ ကလျာတစ်ယောက်ညနေစောင်းမှ ပြန်ရောက်လာသည်။ ဦးသက္ကသည် ကလျာ ပြန်ရောက်ရောက်သော အခါ ဘာမှမပြောသေးပဲ ရေချိုးကာ ကိုယ်လက်သန့်စင်သည်ကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။ အတန်ကြာသောအခါ ကလျာတစ်ယောက် ရေချိုးရာမှ ပြန်ရောက်လာသည်။
ကလျာသည် အဝတ်အစားလဲပြီး အခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာသည်။ ထို့နောက် ဦးသက္က၏ ရှေ့တွင်ရိုရိုသေသေ ထိုင်လိုက်သည်။ ဦးသက္ကသည် ကလျာကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး
”နင် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်လာပြန်ပြီလား။ ငါထင်တာ မမှားဘူးဆိုရင် နင် ကျားနက်စံအိမ်က လူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လာပြီထင်တယ်။”
” ဟုတ်တယ် ဘဘ ”
” ဘာဖြစ်လို့ သူတို့နဲ့ ရန်ညှိုးရန်စဖြစ်အောင် လုပ်တာလဲ။ ကျားနက်စံအိမ်က လူတွေအကြောင်း နင်မသိဘူးလား။”
” ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ် ဘဘ သူတို့က ကျွန်မကို အရက်ဆိုင်ထဲမှာ ရိသဲ့သဲ့လုပ်လို့ ”
”အဲဒါနဲ့ နင်သူတို့ကို အသေ သတ်ခဲ့တယ်ပေါ့။”
ဦးသက္ကသည် ခေါင်းကိုခါရမ်း၍ သက်ပြင်းရှည်ကြီးကို ချလိုက်သည်။
ကလျာသည် ဦးသက္က၏ အမေးကို ပြန်မဖြေပဲ အံကိုသာ တင်းတင်းကြိတ်ထားသည်။ ဦးသက္ကသည် စဉ်းစားရင်းမှ တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသလို ကလျာအား ဆတ်ခနဲကြည့်၍ ….
”နင်အရင်က ကျားနက်စံအိမ်နဲ့ တစ်ခုခု ပတ်သက်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။”
ကလျာသည် အံကိုကြိတ်မြဲ ကြိတ်ထားသည်။ ထို့နောက် သူမသည် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တော့သည်။ ဦးသက္ကသည် ကလျာ အငိုရပ်သည်အထိ စောင့်ဆိုင်းနေ၏။
”နင် ငါ့ဆီကိုရောက်တာ ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီနော်။”
“နင်လိုချင်တဲ့ သိုင်းပညာကိုလည်း ဘဘက သင်ပေးခဲ့တယ် မဟုတ်လား။”
“ဒါပေမဲ့ နင်သိထားဖို့က သိုင်းပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်မကြီးနဲ့ ၊ သိုင်းပညာဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူသလို ထက်မြက်မှုကလည်း အင်မတန် ကွာခြားတယ်။”
ဦးသက္ကက ပြောနေရင်းမှ ကလျာကို တစ်ချက် ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ကလျာသည် ခေါင်းငုံ့ပြီး နားထောင်နေ၏။
“ငါဆိုလိုတာက သိုင်းပညာ ဘယ်လောက်ပဲ တော်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် ခဏပဲကျော်ကြားတယ်။ အချိန်ကျရင် သူ့ကိုနိုင်တဲ့လူ ပေါ်လာမှာပဲ။ ”
”ဟုတ်ကဲ့ ဘဘပြောတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။”
“အခုနင် ကျားနက်ဂေဟာကလူကို သတ်မိခဲ့တာ ကျားနက်ဂေဟာသခင် ရာဇာကို စိန်ခေါ်လိုက်တာ နဲ့ အတူတူပဲ။ ”
ကလျာသည် ဦးသက္ကကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ သူမ၏ မျက်နှာ၌ ခံပြင်းမှုများက ပြည့်နှက်နေ၏။ ကလျာ၏ မျက်နှာသွင်ပြင်ကို ကြည့်၍ သူမရင်ထဲ၌ ခံစားမှုများကို ဦးသက္ကက တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ခံစားမိသည်။
“ကျားနက်ဂေဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘဘကို ပြောပြပါလား။”
ကလျာသည် အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ စဉ်းစားနေသည်။ ထိုသို့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း သူမမျက်နှာပေါ်တွင် ဒေါသအရိပ်အရောင်များက ဖုံးလွှမ်းသွားတတ်သည်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ ဘဘကို ပြောပြပါ့မယ်။”
ဦးကောင်းသာ ဆိုလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်၌ လူတိုင်းသိသည်။ သူသည် နယ်စားကြီး၏ အကြံပေး စာပေပညာရှင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကဗျာများ၊ သီချင်းများကို ကောင်းစွာရေးသားပြီး နာမည်ကျော်ကြားနေသူ ဖြစ်သည်။
ဦးကောင်းသာတွင် သမီးတစ်ယောက်နှင့် သားလေးတစ်ယောက် ရှိသည်။ သူ၏ သားနှင့်သမီးကိုလည်း သူကဲ့သို့ပင် အနုပညာ စာပေသမား ဖြစ်စေချင်သည်မှာ သူ၏ ဆန္ဒဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တွင် ဦးကောင်းသာ၏ နေအိမ်သို့ မမျှော်လင့်သော ဧည့်သည်တစ်စု ရောက်ရှိလာသည်။ မင်းညီမင်းသားဟန်ပန်နှင့် ခန့်ခန့်ညားညား ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်တော်များကို ဦးကောင်းသာ က ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဧည့်ခံသည်။ ထိုသို့ အခြွေအရံများစွာနှင့် ရောက်ရှိလာသူမှာ ကျားနက်ဂေဟာ သခင်ဖြစ်သူ ရာဇာပင် ဖြစ်သည်။
ရာဇာသည် ဦးကောင်းသာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဦးကောင်းသာ၏ မိသားစုများကိုပါ တစ်လှည့် ကြည့်လိုက်သည်။ ဦးကောင်းသာက ရိုးရိုးသားသားပင် မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
” ဒါက ကျုပ်ဇနီးပါ ။ ”
ရာဇာက ခေါင်းညိမ့်ပြ၍ အပျိုမလေး ကလျာကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကလျာအနီးတွင် ငါးနှစ်သားအရွယ် မင်းခန့် ရပ်နေသည်။
” ဒါကတော့ ကျုပ်ရဲ့ သမီးနဲ့ သားပါပဲ။ ”
” ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ”
ရာဇာကပြောပြီး ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် အကျအနပင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
” လာတဲ့ ကိစ္စလေး သိပါရစေ။ ”
ဦးကောင်းသာက လေးလေးစားစားပင် မေးလိုက်သည်။
” ခင်ဗျားမှာ ကျော်သာဆိုတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက် ရှိတယ်နော်။ ”
ကျော်သာဆိုသော နာမည်ကြားလိုက်သည်နှင့် ဦးကောင်းသာ တစ်ယောက် မျက်နှာပျက်သွားသည်။ ရာဇာက ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပြီး
” ကျုပ်သိတယ် ။ နောက်ထပ် ကျုပ်သိထားတာ တစ်ခုက သူမသေခင် ခင်ဗျားကို ပေးသွားတဲ့ ပစ္စည်းပဲ။ ”
” ဘာပစ္စည်းပါလိမ့်။ ကျုပ်လည်း ဘာမှမသိရပါလား။ ”
ရာဇာသည် ဦးကောင်းသာကို စူးရှသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် ကြည့်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် အိတ်ကြီးတစ်အိတ်ကို ဦးကောင်းသာရှေ့တွင် ပစ်ချလိုက်သည်။
” ဒီအိတ်ထဲမှာပါတဲ့ ငွေတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ မိသားစု တစ်သက်လုံး ထိုင်စားလို့ရတယ်။ ကျုပ်ကို ဦးကျော်သာ ပေးသွားတဲ့ အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်း ထုတ်ပေးပါ။ ”
” ဘာအိပ်မက်သိုင်းကျမ်းလဲ ကျုပ်ဆီမှာလည်း ဘာမှမရှိပါလား။ ”
” ရတယ်လေ ။ ကျုပ်က ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တောင်းတာကို ခင်ဗျားက မပေးချင်ဘူးဆိုရင်။ လာကြစမ်း။ ဟိုကောင်မလေးကို ဖမ်းချုပ်ခဲ့ ။ ”
” ဒီမှာ ဦးကောင်းသာ ကျုပ်တောင်းတဲ့ သိုင်းကျမ်းစာအုပ်ကို ယူခဲ့ပြီး ခင်ဗျားသမီးကို ကျုပ်စံအိမ်မှာ လာရွေးပါ။ သုံးရက် ကျော်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားသမီးအတွက် ကျုပ်အဆိုးမဆိုနဲ့။ ”
တောင်သုံးလုံးမြို့၏ ကျားနက်ဂေဟာသည် ခမ်းနားကြီးကျယ်လှပေသည်။ အဆင့်မြင့်သော သိုင်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေသည့် ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခုဆိုလျှင်လည်း မမှားပေ။ ကလျာမှာမူ ဂေဟာကြီးအတွင်းရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော အခန်းတစ်ခုအတွင်းမှ လောကငရဲကို ခံစားနေရပေသည်။ ထိုအခန်းကျဉ်းထဲ၌ သူမအား ပိတ်လှောင်ထားသည်မှာ နှစ်ရက်ကျော်ကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်။ သုံးရက်ပြည့်သော အချိန်တွင်မှ သိုင်းကျမ်းကို လာရောက်မပေးခဲ့သော် သူမဘဝသည် မတွေးဝင့်စရာပင် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ တွေးနေစဉ် အခန်းတံခါး ပွင့်သွားပြီး လူတစ်စု အခန်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကျားနက်ဂေဟာသခင် ရာဇာနှင့် လက်ထောက်နှစ်ယောက် အပါအဝင် သိုင်းသမား ငါးယောက်ခန့်ပင် ဖြစ်သည်။ ရာဇာက ပြောသည်။
“ဒီမှာ မိန်းကလေး မင်းကို ငါ လက်ဖျားနဲ့ မတို့သေးဘူး။ အဲ… သိုင်းကျမ်းပါလာရင်ပေါ့ ။ သိုင်းကျမ်း မရရင်တော့ မင်းရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို လက်လွှတ်ရမဲ့အပြင် အသက်ချမ်းသာရာရဖို့လဲ မစဉ်းစားနဲ့ ။ မင်းအဖေ သိုင်းကျမ်း ယူလာပါစေလို့သာ ဆုတောင်းပါ။”
ကလျာရဲ့ မေးစေ့ကို ဆွဲမော့ရင်း နှုတ်ခမ်းဖျားကို လက်နဲ့ ဖျစ်ညှစ်ရင်း ပြောသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အချိန်တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးလာသည်။ အချိန်သည် ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ရသူတို့အတွက် ကုန်လွယ်သော်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသူအတွက်မူ လွန်စွာကြာမြင့်သည်ဟု ခံစားရမြဲဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကလျာသည်လည်း အခန်းကျဉ်းထဲတွင်နေရင်း သေရမည့် အချိန်ကို အချိန်ကုန်ခဲစွာ စောင့်မျှော်နေရသည်။ ချက်ချင်း သေရမည်ဆိုလျှင် ကလျာတစ်ယောက် ဤမျှ စိတ်ဆင်းရဲမည် မဟုတ်ပေ။
ကျားနက်ဂေဟာသခင် ရာဇာ သည် ကလျာဆီရောက်လာတိုင်း ကလျာ၏ ပြည့်ဖြိုးလှသော ရင်သားကြီးများနှင့် စွင့်ကားလှသော တင်သားများကို ရမက်လွှမ်းသော မျက်လုံးများဖြင့် အမြဲလိုလို ကြည့်သွားလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့အကြည့်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် မိမိကို ရက်စက်စွာ ဖျက်ဆီးမည်ကို သိရှိသောကြောင့် ကလျာ ပိုမိုကြောက်လန့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခန်းတံခါး ပွင့်သွား၏။ ရာဇာ၏ အစောင့် နှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ကလျာကို ဆွဲခေါ်ကာ အိပ်ခန်းတစ်ခုထဲသို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင် ကြီးမားသော ကုတင်ကြီးတစ်ခုက ကလျာကို စောင့်ကြိုနေသည်။ ကုတင်ဘေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အရက်သောက်နေသော ရာဇာကို တွေ့သည်။ ရာဇာ၏ မျက်နှာတစ်ခုလုံးသည် အဆီပြန်ပြီး ရမ္မက်ခိုးများ ဝေနေသည်။
“မင်းတို့နှစ်ယောက် သူ့ကို လက်နှစ်ဖက်ပူးပြီး ကုတင်ခေါင်းရင်းတိုင်မှာ ပက်လက်လှန် ကြိုးတုတ်ထားလိုက် ။ အဝတ်တွေ မချွတ်နဲ့ဦး။ ပြီးရင် သွားတော့။”
ရာဇာ၏ တပည့်နှစ်ယောက်က တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပြီး အခန်းပြင်သို့ ပြန်ထွက်သွားကြသည်။ အရက်တစ်အိုး ကုန်လောက်သောအခါ ရာဇာ အရက်သောက်နေရာမှ ထလာပြီး ကလျာ အနီးသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်အနေအထားနှင့် ကော့ကော့လေး ဖြစ်နေသော ကလျာကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်သို့ လှန်ပြီး ကုတင်ခေါင်းရင်းတန်းနှင့် ကြိုးတုတ်ထားသောကြောင့် အပျိုစင်တစ်ယောက်၏ ဖွံ့ထွားစ ရင်အစုံကို ကော့ပြထားသလိုပင် ဖြစ်နေသည်။
ရာဇာသည် ကလျာထံသို့ လက်လှမ်းလိုက်ပြီး အဝတ်များကို ချွတ်သည်။ ကလျာသည် ကြောက်ရွံ့လှသောကြောင့် အသံလုံးဝ မထွက်မိပေ။ ရာဇာပြုသမျှကိုသာ မျက်လုံးလေး အဝိုင်းသားနှင့် ကြည့်နေမိသည်။ အပေါ်ရင်ပိုင်း အကာအဝတ် ကျွတ်သွားသောအခါ အကြမ်းပန်းကန်လုံး သာသာမျှသာရှိသော ရင်နှစ်မွှာသည် ပေါ်ထွက်လာသည်။ ပန်းနုရောင်ရဲရဲ နို့သီးခေါင်းလေးများက အတွင်းသို့အနည်းငယ် ချိုင့်ဝင်နေသည်။ ၎င်း၏အောက်ဖက်တွင် ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်အောက်မှ အမွှေးရေးရေးလေးသာ ပေါက်သေးသော အပျိုစင် အဖုတ် အသစ်စက်စက်လေးက လှလွန်းစွာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ချပ်က စေ့ကာနေသည်။
ရာဇာသည် ကာမရမ္မက်ဇော ကြီးမားသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သူသည် ခွန်အားကြီးမားသူပီပီ အကြမ်းပတမ်း လုပ်တတ်သူ ဖြစ်၏ ။ ယခုအချိန်တွင်လည်း ကလျာ၏ ဖြူဝင်းကာ သေးငယ်သော အဖုတ်လှလှလေးကို တွေ့သောအခါတွင် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အဝတ်အစားများကို အလျင်အမြန် ဆွဲချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်သည်။ အပျိုစင်ကလေး ကလျာသည် ယောကျာ်းတန်ဆာကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသောကြောင့် ရာဇာ၏ လီးကြီးကို မြင်ရသောအခါ လန့်သွားပြီး သတိပြန်ဝင်လာသည်။
”ရှင် လွှတ်နော် ။ ရှင် ခွေးကျင့်ခွေးကြံ မကြံနဲ့။”
”အေး ငါက ခွေးမဟုတ်ဘူး ။ ကျားနက်ကွ ကျားနက် နင့်ကို ကျားကျင့်ကျားကြံပဲ ကြံမယ်။”
စကားဆုံးသောအခါ ရာဇာသည် ကလျာ၏ ပေါင်ဖြူဖြူလေး နှစ်လုံးကို ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး အနည်းငယ်သာ ဟသွားသော အဖုတ်ကလေးထဲသို့ လီးကြီးကို မညှာမတာ ထိုးသွင်းတော့သည်။ နာကျင်လှသော ဝေဒနာကို သက်သာလို သက်သာညား ကလျာတစ်ယောက် အော်ဟစ်ငြီးငြူမိသည်။
ကလျာ၏ နာနာကျင်ကျင် ဆွဲဆွဲငင်ငင် အော်ဟစ်လိုက်သံက ရာဇာအတွက် ပိုမိုစိတ်ကြွလာစေသည်။ လီးကို အနောက်သို့ အနည်းငယ် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အားထည့်ကာ တစ်ချက်ထဲ အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
”ဗြွတ် … ဖောက် …. ”
”အား…. နာတယ်…..။ ”
အပျိုမှေးပေါက်သံနှင့်အတူ ကလျာ နာကျင်လွန်းသောကြောင့် အစွမ်းကုန် အော်ငြီးမိသည်။ ရာဇာက အဆုံးထိ ထိုးသွင်းပြီးသောအခါ အချိန်မဆွဲပဲ ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး နို့လေးနှစ်လုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲကိုင်ကာ နောက်တစ်ကြိမ် သားအိမ်ခေါင်းထိရောက်အောင် ထပ်မံဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ နူးညံ့လှသော နို့လေးနှစ်လုံးကို လက်ကြမ်းကြီးဖြင့် ဖိညှစ်ဆွဲကိုင်သည့်အပြင် အဖုတ်ထဲမှလည်း လွန်စွာနာကျင်လှသောကြောင့် ကလျာ မျက်လုံးတွေ ပြာဝေလာပြီး ခေါင်းတွေပင် မူးနောက်လာတော့သည်။
ထို့နောက် ရာဇာက ကလျာ၏ အပျိုစင် သွေးများဖြင့် ပေကျံနေသော လီးကြီးကို အဖုတ်လေးထဲမှထုတ်ပြီး ကလျာမြင်အောင် ပြသည်။
“ဒီမှာကြည့် ကောင်မလေး နင့်အပျိုစင် အဖုတ်လေးတွေ ပေနေတဲ့ ငါ့လီးကြီး ဘယ်လောက် လှလဲဆိုတာ”
ကလျာတစ်ယောက် ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ရာ လီးကြီး တစ်ခုလုံး သွေးချင်းချင်း နီနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပြီး ဘယ်လိုမှ မဟန်နိုင်တော့ပဲ မေ့လဲသွားတော့သည်။ ရာဇာလည်း ကလျာ မေ့လဲသွားသည်ကို ဘာမှမပြောတော့ပဲ လီးကြီးကိုသာ အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်တော့သည်။
ရာဇာသည် ကလျာ မေ့မြောနေစဉ် အဖုတ်ကို သုံးချီ ၊ ပါးစပ်ကို တစ်ချီ လိုးသည်။ ပါးစပ်ကို လိုးသောအခါ အာခေါင်ထဲထိ ရောက်အောင်ပင် မညှာမတာ လိုးသည်။ ထို့နောက် အစောင့်တစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ သူ့လက်ရုံးတပည့် နှစ်ယောက်ကို သွားခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။
”သီဟ နဲ့ သူရ မင်းတို့ နှစ်ယောက် အာရုံမတက်ခင်အထိ ဒီကောင်မလေးကို မင်းတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြ။ မိုးမလင်းခင် သတ်ပြီးတော့ သေမင်း တောင်ကြားမှာ သွားစွန့်ပစ်လိုက်တော့။”
သီဟနဲ့ သူရ သည် ခေါင်းဆောင်ရာဇာ၏ ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် ခွေခွေလေးလဲနေသော ကလျာကို သူတို့အခန်းထဲသို့ ပွေ့ချီ၍ ခေါ်သွားသည်။ ကောင်မလေး၏ အဖုတ်တစ်ဝိုက်တွင် သွေးစလေးများ ပေကျံနေသည်။ သီဟ နှင့် သူရတွင် သီဟက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်။ သိုင်းလည်း ပိုတော်သောကြောင့် ရာဇာ၏ ညာလက်ရုံး ဖြစ်သည်။ ရက်လည်း ရက်စက်သည်။
သူရက သီဟလောက် သိုင်းမတော်ပေ။ စိတ်ထားလည်း များစွာ နူးညံ့သည်။ သီဟတို့နှစ်ယောက် အခန်းထဲသို့ ရောက်သောအခါ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော သီဟက ကလျာကို အရင်လိုးသည်။ သူစိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပြီးသောအခါ ကလျာကို မိုးမလင်းခင် အစဖျောက်ရန် သူရကိုမှာပြီး သူ၏အိပ်ဆောင်သို့ သူပြန်သွားတော့သည်။
သူရသည် သနားသောကြောင့် ကလျာကို မဆက်ဆံတော့ပဲ ပေကျံနေသော သွေးစက်လေးများကို အဝတ်ရေစိုဖြင့် သန့်စင်ပေးသည်။ ထို့နောက် အသက်ကယ်ဆေးကို အနည်းငယ်တိုက်သည်။ သူရသည် အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ကလျာကို မြင်းလှည်းပေါ်သို့တင်ကာ သေမင်းတောင်ကြားသို့ ခေါ်သွားသည်။ မြင်းလှည်းပေါ်တွင် ကလျာတစ်ယောက် သတိရလာသည်။
“အင်း … အင်း….”
မြင်းလှည်းနောက်ခန်းမှ ညီးညူသံ ကြားသောအခါ သူရက
”ရှင်ဘယ်သူလဲ ။ ကျွန်မ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ”
”မင်းကို အစဖျောက်ဖို့ ဆရာက သေမင်းတောင်ကြားကို ပို့ခိုင်းတာ။”
”ကျွန်မကိုမသတ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ် ။ တောင်းပန်ပါတယ်။”
ကလျာ၏ သနားစဖွယ် ငိုယိုတောင်းပန်သံကြားတွင် နဂိုအခံကပင် သနားတတ်သော သူရက လွှတ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
”မင်း ဘယ်တော့မှ ဒီမြို့ပေါ်ကို ပြန်မလာပါနဲ့။ တောထဲမှာပဲ ဇာတ်မြုပ်ပြီး နေပါ။ ဆင်းတော့ မိန်းကလေး။”
သူရသည် ကလျာကို မြင်းလှည်းပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းလိုက်ပြီး တောစပ်တွင် ချပေးကာ ထွက်သွားသည်။ ကလျာလည်း တောထဲသို့ဝင်ကာ ချောက်ကမ်းပါးတစ်ခုပေါ်မှ ခုန်ချပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရန် တွေးနေစဉ် ဦးသက္ကနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလျာသည် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ဖွင့်ပြောပြီးသောအခါ ဝမ်းနည်းသွားသောကြောင့် တရှုံ့ရှုံ့ငိုကြွေးနေသည်။ ဦးသက္ကက ငိုနေသော ကလျာကို နှစ်သိမ့်ပေးနေသည်။ ခေတ္တကြာသောအခါ ကလျာတစ်ယောက် အငိုတိတ်သွားသည်။ ထိုအခါ ဦးသက္ကက
”သမီး …. အခုဆိုရင် ဘဘဆီရောက်တာ ခြောက်နှစ်ကျော်ပြီ။ အတွင်းအား၊ ကိုယ်ဖော့ပညာ ၊ သိုင်းပညာတွေမှာလည်း ပညာကုန်သင်ပေးပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုလိုနေတာ သိုင်းလောက အတွေ့အကြုံပဲသမီး။ အဲဒီတော့ သမီးအနေနဲ့ လက်စားမချေခင် သိုင်းလောကထဲ ဆင်းပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှာပါ။ ဘယ်သိုင်းသမားကိုမဆို အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ် လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ အားနည်းသူကို ကူညီပါ။ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဘယ်အရာမဆို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ လုပ်ဆောင်ပါ။ ကိုယ်အင်အားကြီးတယ် ၊ သိုင်းတော်တယ် ဆိုပြီးတော့လည်း တခြားသူတွေအပေါ် မမောက်မာပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကဲ အခုပဲသွားတော့ သမီး။”
ကလျာလည်း ဦးသက္ကတစ်ယောက် ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့် ယခုလို ချက်ချင်းလက်ငင်း သိုင်းလောကထဲသို့ ဆင်းခိုင်းမည်ဟု မထင်မိပေ။ အပြောကျယ်သော သိုင်းလောကထဲသို့ မိန်းကလေးတစ်ဦးတန်မဲ့ ဆင်းရပေဦးမည်။ အဖေ ၊ အမေ နှင့် မောင်လေးတို့ရော အသက်ရှင်နေသေးလား မသိပေ။ သက်ပြင်းမောကို ကျိတ်ချရင်း အထုတ်ကလေးဆွဲကာ ဦးသက္ကကို ဂါရဝပြုပြီး တောင်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့သည်။
တောတန်းလေး တစ်ခုလုံး သာယာလှပနေသည်။ မိုးဦးရာသီမို့ သစ်ပင်မြက်ပင်လေးများက စိမ်းစိုလှပနေသည်။ ဖားအော်သံများကလည်း တောလမ်းတစ်လျှောက် ဆူညံနေသည်။ ကလျာတစ်ယောက် တောတောင်သဘာဝ စိမ်းလန်းစိုပြည်မှုများကို မခံစားနိုင်ပေ။ ရင်ထဲတွင် ကြီးမားသော အာဃာတ အစိုင်အခဲကြီး တစ်ခု ရှိနေသည်။ ထိုအမုန်းကြွေးကိုဆပ်လို့ မပြီးသေးသ၍ မည်သည့်အရာကမှ ကလျာကို ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု ကလျာ တွေးမိသည်။
ယခုဆိုလျှင် ကလျာအသက်က ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းက တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသော ဘဝမုန်တိုင်းကို ၆ နှစ်လုံးလုံး သိုင်းပညာဆည်းပူးခြင်းဖြင့် ချေဖျက်ခဲ့သည်။ ဤသွေးကြွေးကို မြန်မြန်ဆပ်လိုက်မှ မြန်မြန်နားအေးမည်ဟု စဉ်းစားမိသောကြောင့် ကျားနက်ဂေဟာသခင် ရာဇာရှိရာ မြို့ဆီသို့ ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်။
ကျားနက်စံ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ ညမှောင်စပျိုးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ညဉ့်နက်မှ စံအိမ်အတွင်းသို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်သည်က ပိုကောင်းမည်ဟု စဉ်းစားမိသောကြောင့် စံအိမ်အတွင်းသို့ မဝင်သေးပဲ အိမ်အနီးရှိ သစ်ပင်ကြီးတစ်ခုပေါ်သို့ တက်ကာ အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်သည်။
ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင်၏ အော်မြည်သံကို ကြားရသည်။ ကလျာ၏ကိုယ်မှ အကြောအခြင်များ တောင့်တင်းသွားသည်။ သွားရန် အချိန် ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်က အဖြစ်အပျက်များကို မှတ်မိသေးသောကြောင့် စံအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရန်နှင့် ရာဇာ၏ အခန်းကို ရှာဖွေရန် မခက်ခဲလှပေ။ အစောင့်များ လှည့်လည်သွားလာနေသည်ကို ကျော်ဖြတ်ရင်း ရာဇာနေထိုင်ရာ အခန်းပေါ်ရှိ ခေါင်မိုးပေါ်သို့ သွားရောက်လိုက်သည်။
ခေါင်မိုးအုတ်ကြွပ်ပြားကို အသံမမြည်အောင် ခွာလိုက်ပြီး အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ခေါင်မိုးအပေါက်က ဂေဟာသခင်ရာဇာ၏ ကုတင်ကြီးနှင့် တည့်တည့် ဖြစ်နေသည်။
ကလျာတစ်ယောက် အံသြလွန်း၍ အသံတောင် ယောင်ရမ်း၍ ထွက်မလို ဖြစ်သွားသည်။ ရာဇာ၏ တန်ဆာကြီးက တောင်မတ်နေသည်။ မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းက မကြည့်ရက်စရာ။ ဖြူဖွေးနုငယ်ကာ ချောမောလှပနေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်တွင် ကြိုးတုတ်ထားသည်။ ခြေနှစ်ချောင်းကို နောက်လှန်ကာ ခြေထောက်တစ်ချောင်းစီကို ခေါင်းရင်းကုတင်တိုင် တစ်ခုစီနှင့် ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းကအောက် ခြေထောက်ကအပေါ် ဖြစ်နေသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းနောက်တွင်ထားကာ ပူးကပ်ချည်ထားသည်။
မိန်းကလေးငယ်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် အဝတ်အစားဟူ၍ မရှိ။ နို့သီးလေးများက နီနေသည်။ နို့သီးခေါင်းကလေးများပင် ကောင်းကောင်းမစူသေး။ တစ်တီတူးငှက်တစ်ကောင်လို ခြေထောက်ကို မိုးမျှော်ထားသောကြောင့် ဖင်ပေါက်ကလေးကိုလည်း မြင်ရသည်။ အဖုတ်ကလေးက ခြေထောက်ကို ကားချည်ထားတာတောင် ဟမနေပဲ တင်းတင်းစေ့နေသည်။
ရာဇာသည် ကလေးမလေးကို ဖင်လိုးဖို့များ ကြံနေလားမသိ။ ဆီပုလင်းတစ်ခုကိုယူကာ သူ့လီးကြီးကို ပွတ်သတ်လိုက် ကောင်မလေး၏ ဖင်ပေါက်ထဲကို ဆီများထည့်၍ နှိုက်လိုက် လုပ်နေသည်။ တအောင့်မျှ ကြာသောအခါ သူ့စိက်ကြိုက် အနေအထားဖြစ်သည်နှင့် လီးကြီးကို ဖင်ဝတွင်တေ့ကာ ထိုးထည့်တော့သည်။
ကောင်မလေးခင်မျာ လက်ရော ခြေထောက်ပါ ကြိုးတုတ်ခံထားရသောကြောင့် ရုန်းကန်နေသော်လည်း အရာမထင်ပေ။ ဆီလိမ်းထားသောကြောင့် မီးရောင်အောက်တွင် တောက်ပြောင်နေသော လီးကြီးက ဖင်ထဲသို့ တစ်ရစ်ချင်း တိုးဝင်သွားသည်။ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ အဆုံးထိ ဝင်သွားသောအခါ ရာဇာတစ်ယောက် ဖင်ကိုမြှင့်ကာနှိမ့်ကာဖြင့် စတင်လိုးတော့သည်။ ကောင်မလေးခင်မျာ ရုန်းလို့လဲမရ၊ ဖင်ထဲတွင်လည်း ကြီးမားသော အတန်ကြီးက အပြည့်အကြပ်ပင် နေရာယူထားသောကြောင့် အသံစူးစူးလေးနှင့် အော်နေရှာသည်။ အော်သံကြားလျှင် စိတ်ပိုကြွကာ ပိုကြမ်းတတ်သော ရာဇာအကြောင်းကို မသိသေးလို့ ဖြစ်မည်။
ရာဇာကတော့ အော်သံကြားလေ၊ ပိုကြမ်းလေ ကောင်မလေးက ပိုအော်လေနှင့် မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေသည်။ ရာဇာရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ မျက်ရည်လေးတွေကျပြီး ရာဇာပြုသမျှ ခံနေရသည်။
ကလျာတစ်ယောက် ခေါင်မိုးပေါ်မှနေရင်း အံတင်းတင်း ကြိတ်မိသည်။ သူမကို အနိုင်ကျင့်စဉ်အခါတုန်းက အဖြစ်အပျက်များကို မျက်လုံးထဲတွင် တစ်ကွက်ချင်းစီ ပြန်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီး ခေါင်မိုးပေါ်မှ ခုန်ဆင်းလိုက်သည်။
ကလျာ၏ ကိုယ်ဖော့ပညာ အစွမ်းကြောင့် အသံ တိုးသဲ့သဲ့သာ မြည်သွားသည်။ ရာဇာသည် မိန်းမပျိုလေး၏ ဖင်ကိုသာ အားရပါးရ လိုးနေသောကြောင့် ကလျာခေါင်မိုးပေါ်မှ ဆင်းလာသည်ကို မသိလိုက်ပေ။ သို့သော် ကလျာသည် အနက်ရောင် သိုင်းသမား မဟုတ်ပါ။ လက်စားချေစရာ ရှိသော်လည်း အလစ်ချောင်းလုပ်ကြံခြင်းကို မပြုလုပ်လိုပါ။ ထို့ကြောင့် ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်လိုက်သည်။
ချောင်းဟန့်သံ ကြားလိုက်သောကြောင့် ရှေ့ကိုသာမဲ၍ ဆောင့်နေသော ရာဇာတစ်ယောက် ရုတ်တရက် လန့်သွားသည်။ ကလျာကို ရုတ်တရက် တွေ့သောအခါ ရုတ်တရက်မို့ ရာဇာ လန့်သွားသည်။ ချောမောလှပကာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းပြည့်ဖြိုးသော မိန်းမလှလေး တစ်ယောက်ဟုသာ သိသည်။ လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်ကအပျိုပေါက်ကလေးသာသာ ရှိသေးသောကြောင့် ယခုလို ဖွံ့ဖြိုးလှပလာသော ကလျာကို မြင်လိုက်ရသောအခါ မမှတ်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
”မင်းဘယ်သူလဲ။ ဘာလာလုပ်တာလဲ။ ဧကန္တ နင်ငါ့နဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ချစ်လို့ လာခဲ့တာလား။”
ကလျာ မျက်နှာ တစ်ချက်မဲ့ပြီး
”ရှင်ဟာ လူယုတ်မာပဲ။ အခုထိ ကျွန်မကို မမှတ်မိသေးပဲကိုး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်တုန်းက အပျိုစင်ဘဝကို ရက်ရက်စက်စက် ဖျက်ဆီးပြီး သေမင်းတောင်ကြားမှာ သတ်ဖို့ ရှင့်တပည့်တွေနဲ့ ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ ကလျာပဲ။”
”အော် …. ဦးကောင်းသာ သမီးလေးကိုး။ တွေ့ရတာနဲ့ အတော်ပဲ မင်းအမေတောင် ဟိုတလောကပဲ ငါ့တပည့်တစ်ယောက်နဲ့ လိုက်ပြေးသွားလို့ ငါလည်း လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ လိုးရတာလည်း နှစ်နဲ့ချီ ကြာပြီဆိုတော့ ဟောင်းနေပြီလေ။ ငါနဲ့လည်း သိပ်မအိပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ငါလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လွှတ်ထားလိုက်တယ်။”
ကျွန်မအမေ အခုထိ အသက်ရှင်နေသေးလား ဟုတ်လား။ အမေနဲ့ အဖေအကြောင်း ပြောပြပါ။ ပြောပြပြီးမှ ရှင့်ကို ကျွန်မလက်နဲ့သတ်ပြီး လက်စားချေရမယ်။
” ဟား ဟား… မင်းရဲ့ သိုင်းပညာလေး မတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ ငါ့ကို လက်စားချေပြီး သတ်မလို့လား ကလျာရယ်။ နင်သိုင်းသင်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ငါကလည်း သိုင်းကျမ်းတစ်ဆူရလို့ ပြိုင်ဘက်ကင်း ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါနင့်တို့ မိသားစုရဲ့ ကျေးဇူးတွေပေါ့။”
ရာဇာသည် အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်းနောက်ကို တကောက်ကောက် လိုက်ရင်း မမျှော်လင့်ပဲ ဝိညာဉ်နတ်သိုင်းကျမ်းကို ရရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ရာခန့်က အနက်ရောင် သိုင်းလောကမှ သိုင်းရာဇာတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သူနှင့်ရင်ဆိုင်ရသူတိုင်းသည် အသက်ဆုံးရှုံးရသည်ချည်း ဖြစ်သောကြောင့် လူစင်စစ်မှ ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားသည်ကို အစွဲပြုပြီး ဝိညာဉ်သိုင်းသမားဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် သိုင်းလောကမှ ထိတ်ထိတ်ကြဲ သိုင်းသမားတစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာပြီး ဝိညာဉ်သိုင်းသမားကို ဆုံးမခဲ့သောကြောင့် ဝိညာဉ်သိုင်းသမား သေဆုံးခဲ့သည်။ အိပ်မက်ထဲမှာပင် အနိုင်ရရန် ခက်ခဲလှသော ဝိညာဉ်သိုင်းသမားကို ဆုံးမနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ထိုသိုင်းသမားကို အိပ်မက်သိုင်းသမားဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ထိုသိုင်းသမား၏ သိုင်းပညာကိုလည်း အိပ်မက်နတ် သိုင်းပညာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
”ကဲ … မိန်းကလေး ၊ မင်းငါနဲ့ အခုည ကာမဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် မင်းသိချင်နေတဲ့ မင်းအမေ အကြောင်းနဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မင်းရဲ့မောင်လေး အကြောင်းကို ပြောပြမယ်။ ”
”ရှင်… ရှင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား။”
ကလျာတစ်ယောက် ဒေါသထွက်လွန်းသဖြင့် ဓားကိုဆွဲထုတ်ကာ တစ်ဟုန်ထိုး ဝင်တိုက်တော့သည်။ ရာဇာက အသာအယာ ရှောင်တိမ်းပြီး သိုင်းကွက်တစ်ခု ဖော်ထုတ်လိုက်သောအခါ ချွမ်းကနဲ အသံမြည်ကာ ကလျာ၏ လက်ထဲမှဓားသည် ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။ ရာဇာက ရမ္မက်လွှမ်းသော မျက်လုံးဖြင့် ကလျာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဝေ့ကြည့်ကာ
”ဒီမှာ မိန်းကလေး ။ မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုမှ နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ။ အဲဒီတော့ ငါ့အလိုကို အသာတကြည်နဲ့ လိုက်လျောပါ။ အကြမ်းနည်း သုံးရမယ် ဆိုရင်တော့ နာတဲ့အပြင် မင်းအမေအကြောင်းလည်း ဘာမှသိရမှာ မဟုတ်ဘူး။”
ကလျာလည်း စိတ်ဓာတ်ကျသွားသည်။ သိုင်းကွက်တစ်ကွက်ထဲဖြင့် အရှုံးပေးလိုက်ရသည့်အပြင် မိဘနှစ်ပါးနှင့် မောင်လေးအကြောင်းလည်း သိချင်သောကြောင့် ရာဇာ၏ အလိုကို လိုက်လျောလိုက်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်မည်ဟု စဉ်းစားကာ ရာဇာ၏ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောလိုက်ရတော့လေသည်။
” ကဲ ကလျာ ။ အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်လိုက်၊ ပြီးရင် နင့်ကြောင့် ပြန်ပျော့သွားတဲ့ ငါ့လီးကြီးကို ပြန်မာလာအောင် လာစုပ်ပေးစမ်း။ ”
ရာဇာသည် မိမိလက်ခုပ်ထဲမှရေဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားသော ကလျာကို ခပ်ရိုင်းရိုင်းပင်ပြောသည်။ ကလျာလည်း မတတ်သာသောကြောင့် အဝတ်အစားများကို တစ်ခုမကျန် ချွတ်လိုက်သောအခါ လှပဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာသည် ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထို့နောက် ရာဇာနားသို့ တိုးကပ်သွားပြီး အောက်သို့ တွဲလောင်းကျကာ ပျော့နေသော လီးကြီးကို အရင်းမှကိုင်ကာ စတင်စုပ်ပေးတော့သည်။
ဦးသက္က၏ သင်ကြားပေးမှုကြောင့် လီးစုပ်ကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်သော ကလျာသည် ရာဇာ၏ လီးကြီးကို အရင်းမှ အဖျားသို့ လျှာအပြားလိုက် လျက်လိုက်သောအခါ ရာဇာထံမှ
”ကျွတ်… အား… ”
ဟူသော ညည်းသံထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် ကလျာသည် ဒစ်တစ်ခုလုံးကို ငုံသွင်းကာ ပါးစပ်အတွင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးသည်။ ပါးစပ်ထဲ ဝင်ရောက်လာသော ဒစ်ထိပ်ဖျားကိုလည်း လျှာဖြင့်သပ်ပေးသည်။ ကလျာရဲ့ ပုလွေစွမ်းအောက်တွင် ရာဇာတစ်ယောက် ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာသောကြောင့် ကလျာရဲ့ခေါင်းကို နောက်သို့တွန်းကာ လီးကိုပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ရသည်။
”ကဲ … ငါအခု ဟိုကောင်မလေးကို အရင်လိုးမယ်။ ပြီးမှ နင့်အလှည့်ပေါ့ အခုတော့ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ဟိုကလေးမ အဖုတ်ကို သွားလျက်စမ်း။ ငါက ဖင်ကိုအရင်လိုးနှင့်မယ်။”
ကလျာတစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ တစ်တီတူးလို ခြေထောင်မိုးမျှော်နေသော ကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်ကို သွားလျက်ရသည်။ အစေ့လေးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ပေးလိုက်သောကြောင့် ကောင်မလေး၏ မှိတ်နေသော မျက်လုံးလည်း ပွင့်လာသည်။ ထို့နောက် လျှာကို အပြားလိုက်ထားကာ အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို နှံ့အောင်လျက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ရာဇာကလည်း ကောင်မလေး၏ ဖင်ထဲသို့ လီးကြီးကိုထည့်ကာ ပြန်ထုတ်ကာဖြင့် ဆောင့်နေသည်။
ရာဇာရဲ့ဖင်လိုး ခံရခြင်းကိုခံရသော မိန်းကလေးငယ်သည် သနားဖို့ ကောင်းလှသည်။ နဂိုကပင် မဆန့်မပြဲ ကြီးမားလှသော လီးတန်ကြီးမှာ သူမ၏ စအိုပေါက် နီနီလေးထဲသို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဝင်ထွက်နေသည်။ ကောင်မလေးမှာ မချိမဆန့် အော်ညီးရင်း တွန့်လိန်နေရှာသည်။ သူဇာလည်း သနားလာတာနဲ့ မိန်းကလေးငယ် အနာသက်သာအောင် အဖုတ်လေးကို စိတ်ပါလက်ပါ လျက်ပေးလိုက်သည်။
ကောင်မလေး အနာသက်သာသွားလို့ ထင်သည်။ နာနာကျင်ကျင် အော်သံ ပျောက်သွားပြီး အရသာရှိလို့ ညည်းသည့် ညည်းသံလေးများသာ ထွက်ပေါ်လာသည်။
ရာဇာ အပျိုဖင်လေးကို အချက်ငါးဆယ်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ ဖင်ပါကင်လေးရဲ့ တင်းကြပ်မှုကို မတောင့်ခံနိုင်တော့ပဲ သုတ်ရည်များ တဗျင်းဗျင်းထွက်ကာ ပြီးသွားတော့သည်။
”ကဲ… ကလျာ… ဟိုအဖုတ်ကို လျက်တာတော်တော့။ အခု ငါ့လီးကို လာလျက်စမ်း။”
ကလျာ နေရာကို အနည်းငယ်ရွေ့ကာ ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်နေသော ရာဇာရဲ့ ပေါင်ကြားများ ခေါင်းအပ်လိုက်ပြီး လီးကို နေရာလပ်မကျန် ပြောင်အောင် လျက်ပေးရသည်။ ရာဇာသည် သူ့ပေါင်ကြားမှာ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ လီးစုတ်ပေးနေသော မိန်းမချောလေးကိုကြည့်ရင်း စကားပြောချင်လာသည်။ ပုံမှန် စကားပြောချင်သည် ဆိုခြင်းထက် ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေ ပြောချင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် စကားစသည့်အနေဖြင့်
“ဒီမှာ မိန်းကလေး။ မင်းက အခုလို ငါ့ကို ပြုစုပေးတော့ ငါကလည်း မင်းသိချင်တာကို ပြောပြမယ်”
ထိုစကားကို ကြားတော့ လီးစုပ်ပေးနေသော ကလျာ ဝမ်းသာသွားသည်။ သူ့မိဘ နှစ်ပါးနဲ့ မောင်လေးအကြောင်းကို သိရတော့မှာ မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် လီးကို စုပ်ရက်သားအပေါ်ကို မော့ကြည့်ရင်း ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ငြိမ့်ပြမိသည်။
”မင်းကိုဖမ်းပြီး သုံးရက်ကြာတဲ့အထိ မင်းအဖေနဲ့ အမေ ရောက်မလာလို့ မင်းတို့အိမ်ကို ငါသွားတိုက်ခိုက်တယ်။ မင်းအဖေကတော့ တိုက်ပွဲမှာ သေသွားတယ်။ မင်းမောင်လေးကတော့ မင်းတို့အိမ်တော်ထိန်းကြီးက ကယ်သွားလို့ မမိလိုက်ဘူး။ အဲဒီမှာ အသက်မသေတဲ့ မင်းအမေကို ငါကပဲ ငါ့စံအိမ်တော်ကို ဖမ်းခေါ်လာခဲ့တယ်။ မင်းအမေကို တစ်ခါပဲ အတင်းအကြပ် ကြံစည်လိုက်ရပါတယ် မိန်းကလေးရယ်။ ပထမတစ်ကြိမ် ပြီးကတည်းက ငါ့လီးရဲ့ အရသာကို ကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီး ငါထားသလိုနေ စေရာသွား မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်သွားတာပဲ။ ငါကလည်း အစပိုင်းတော့ မှန်မှန်လိုးပေးပါသေးတယ်။ တဖြည်းဖြည်း နှစ်တွေကြာလာတော့ လိုးချင်စိတ် မရှိတော့တာနဲ့ သိပ်မလိုးဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒီမှာ မင်းအမေက ငါ့တပည့်တစ်ယောက်နဲ့ လိုက်ပြေးသွားတော့တာပါပဲ။ ”
ကလျာ အတော်ပင် ငိုချင်သွားသည်။ သူ့မိခင်သည် ချောမောလှပသော စော်ဘွားသမီးတော်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ စာပေသမားနှင့် လက်ထပ်ပြီးကတည်းက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရာဇာဆိုသော လူကြီးရဲ့ နှောက်ယှက်မှုကြောင့် သူတို့မိသားစုလေး ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။
ကလျာ ရာဇာ့ကို အလွန်ပင် နာကျည်းသွားသည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပင် ဝမ်းနည်းစိတ်များလည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ငါ.. ငါ.. ဒီလူကြီးကို ရအောင် သတ်ရမယ်။ နာကြည်းအားငယ်သော စိတ်များဖြင့် ကလျာတစ်ယောက် ဝမ်းနည်းမျက်ရည် ကျမိသည်။
ကလျာ့မျက်လုံးမှထွက်သော မျက်ရည်တစ်စက်က လီးစုပ်ခံနေသော ရာဇာ့လီးပေါ် တောက်ခနဲကျသည်။ ရာဇာ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး လီးစုပ်တဲ့ အရသာကို ခံနေရာမှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်။ ဒီကောင်မလေး ငိုနေပြီ။ မျက်လုံးလေးတွေ နီရဲ နေသည်။ နှာခေါင်းနီနီလေးနှင့် မျက်ရည်တွေ စီးကျနေသော ကောင်မလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံချင်စိတ်က တမဟုတ်ချင်း ထကြွလာပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ကလျာ့ဆံပင်ကို တစ်ချက်စုကိုင်ပြီး ခေါင်းကို ထိန်းကျောင်းကာ လည်ချောင်းထဲသို့ လီးကို ခပ်နက်နက်ဝင်အောင် ဖိချသည်။
”အု….. အော့….. ”
ကလျာ ပျို့တက်သည်။ မျက်ရည်တွေလည်း ပိုဝဲလာသည်။ နာကျင်စိတ်အပြင် အာခေါင်ကို လာလာထောက်မိသော လီးချောင်းကြီးရဲ့ အထိအတွေ့က ဆိုးဝါးလှသည်။ ဆယ်ချက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်း အာခေါင်ထဲ ဆောင့်ထည့်ပြီးတော့ ရာဇာ အတော်လေး ကျေနပ်သွားသည်။ ဒီကောင်မလေးကိုလည်း ကောင်းကောင်း လိုးပေးရဦးမှာပဲ။
“ကဲ… ကလျာ.. ကုတင်ဘောင်ကို လက်ထောက်ပြီး လေးဘက်ကုန်းလိုက်”
ကလျာလည်း ဦးသက္ကနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ရာဇာ နေခိုင်းသည့်အတိုင်း နေပေးလိုက်သည်။ လှပတဲ့ တင်ပါးတစ်စုံက နောက်ကိုကော့ထွက်ပြီး ဖင်ကြားတဲ့က အဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်နေသည်။ ရာဇာ နောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ကို လက်နဲ့တစ်ချက် စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ အရည်တွေ အတော်ကို စိုရွှဲနေပြီ။ ဒီကောင်မလေး ငါ့လီးစုပ်တုန်းကတည်းက စိတ်ကြွပြီး အရည်တွေ ထွက်နေတာ ဖြစ်မယ်။
”ဟိတ်… ကလျာ…. နင်တော်တော် ခံချင်နေပြီ ဟုတ်လား။ အရည်တွေ ရွှဲနေပြီ။ ပြောစမ်း…”
ကလျာ အတော်ပင် ရှက်သွားသည်။ ရန်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လီးကိုစုပ်ပေးနေရသောကြောင့် ကလျာ စိတ်ထဲတွင် လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် မဖြစ်မိပါ။ ရာဇာဆိုတဲ့ လူကြီးကို မုန်းပြီး သတ်ချင်တာပဲရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ ကလျာ့အဖုတ်က အရည်တွေ တော်တော်ရွှဲနေလေပြီ။ ကလျာ့ကိုယ်ခန္ဓာက ကလျာ ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ပဲ အရည်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ထွက်နေပြီ။ ကလျာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ရာဇာမေးတာ မဖြေပဲ တိတ်ဆိတ်သာ နေလိုက်သည်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်းရိုက်ချက် တစ်ချက်က ကလျာ့ တင်ပါးပေါ်သို့ ကျရောက်လာသည်။ ကလျာ့တင်ပါးတွင် ပူခနဲဖြစ်ပြီး နာကျင်သော ဝေဒနာကို ခံစားရသည်။
”ငါမေးရင် ပြန်ဖြေပါ ကလျာ။ မဖြေရင် နင်ဒီထက် ပိုနာမယ်သာမှတ်။”
လေးဘက်ထောက်ထားသော ကလျာရဲ့ ဖင်ကြားထဲက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ဝတွင် ရာဇာ လီးကို တေ့ကာ ဖိချလိုက်သည်။
လီးတန်ကြီးက အဖုတ်ကလေးထဲသို့ မဆန့်မပြဲတိုးကာ ဝင်ရောက်သွားသည်။ တစ်ချက်ထဲ အားနှင့်ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အဖုတ်တဆုံးထိ ဝင်ရောက်သွားပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးမိသည်။
ကလျာ.. အင့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို ထိမိသောကြောင့် အတော်ပင် အောင့်သွားသည်။ ရာဇာလီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ထိုးထည့်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်ဘောင်ကို ကိုင်ကာ ကုန်းထားသောကြောင့် စွင့်ကားပြီး ဖြူဖွေးနေသော ဖင်တုံးဖွေးဖွေးနှစ်ခုကို အားရပါးရကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့် လိုးတော့သည်။
”အ… အင့်… ”
ကလျာ့ထံမှ ညီးသံ ခပ်တိုးတိုး ကြားရသည်။ ရာဇာကို လုပ်ကြံမည်ဟု စဉ်းစားထားသော်လည်း ရာဇာလိင်တန်ကြီးမှပေးသော ထူးကဲသော အရသာကြောင့် လုပ်ကြံမည့်အတွေးပင် မေ့လျော့သွားသလို ဖြစ်သွားသည်။ ရာဇာ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကလျာကလည်း အားကျမခံ ဖင်ကို နောက်သို့ပြန်၍ ကော့ကော့ပေးနေမိသည်။
အချက်ငါးဆယ်လောက် အဆောင့်ခံပြီးချိန်တွင်တော့ ကလျာတစ်ယောက် ဖင်ကို နောက်သို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကော့တင်ရင်း ပြီးသွားတော့သည်။ ရာဇာသည် ကလျာပြီးသွားချိန်မှာ ဆက်မဆောင့်သေးပဲ လိင်တန်ကို ကလျာ့ အဖုတ်လေးထဲ စိမ်ထားပြီး ကလျာ့အဖုတ်က ဆွဲဆွဲညှစ်တဲ့ အရသာကို ခံစားနေသည်။
တအောင့်လောက်ကြာမှ နေရာပြောင်းပြီး လုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်လိုက်ပြီး ကလျာကို တက်ဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ တစ်ချီပြီးသွားသော ကလျာတစ်ယောက် တော်တော်လေး နှုံးချိသွားပေမဲ့ ရာဇာပြောတဲ့အတိုင်း နေပေးလိုက်သည်။
ကလျာတစ်ယောက် ရာဇာ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လိင်တန်ကို အဖုတ်ထဲထည့်ကာ ခပ်မှန်မှန်ပင် ဆောင့်ပေးနေသည်။ ဆောင့်ပေးနေရင်း စိတ်ထဲက ရာဇာ့ကို လုပ်ကြံနိုင်မည့် နည်းလမ်းကို စဉ်းစားမိသည်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကာမဆက်ဆံလို့ ပြီးခါနီးအချိန်ရောက်ရင် အရာရာကို မေ့လျော့နေတတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကို ငါကောင်းကောင်း အသုံးချရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြောရင်း အဝင်အထွက် မှန်မှန်လေးပင် ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
တအောင့်လောက်ကြာတော့ ရာဇာထံမှ နှာမှုတ်သံ တရှုးရှုးထွက်လာပြီး အောက်ကနေ ခပ်ပြင်းပြင်း ကော့ကော့ထိုးတာကို တွေ့ရသည်။ ကလျာလက်ဝါးတစ်လျှောက် အတွင်းအားကို အကုန်စုစည်းလိုက်သည်။ အတွင်းအားကို လက်မှာစုစည်းလိုက်သောကြောင့် ကြွက်သားများ တောင့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး အဖုတ်အတွင်းသားများက ရာဇာ့လိင်တန်ကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ စုပ်ဆွဲလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
ဆိုပြီး ရာဇာတစ်ယောက် ခေါင်းကိုကြွကာ ကလျာ့နို့နှစ်လုံးကိုစို့ရန် ကုန်းအထ ကလျာ လက်ဝါးစောင်းက ရာဇာ့လည်မျိုဆီသို့…
ရာဇာ့အော်သံက ကျားနက်အိမ်တော် တစ်ခုလုံးအနှံ့ ဟိန်းထွက်သွားသည်။ အခန်းအပြင်မှ လူသံအချို့ကြားရသည်။ အစောင့်များက သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ အိပ်ဆောင်သို့ အခွင့်မရှိပဲ ဝင်ခွင့်မရသောကြောင့် အပြင်ဘက်မှသာ အသံပေးကြသည်။
ကလျာ အဝတ်အစားကို ကမန်းကတန်း ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ကာ အပြင်သို့ ခုန်ထွက်လိုက်သည်။ ပြတင်းပေါက် အပြင်ရောက်တော့ ခြံထဲက အစောင့်တစ်အုပ်နဲ့ တန်းတိုးသည်။ အစောင့်များက ကလျာ့ကို မြင်တာနဲ့ ဝိုင်းတိုက်ကြသည်။ တိုက်ခိုက်သံတွေက အိမ်တော်တစ်ခုလုံးကို တပ်လှန့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး ကလျာ့အနီးသို့ ရန်သူတွေ ဝိုင်းအုံလာသည်။
ကလျာ အံကို တင်းတင်းကြိတ်ကာ ဇွဲမလျော့ပဲ တိုက်သည်။ တိုက်ရင်းတိုက်ရင်း မောဟိုက်လာပြီး အစောင့်တစ်ယောက်ရဲ့ ဓားချက်က ညာဘက်လက်မောင်းကို ရှပ်ထိသည်။ အပေါ်ယံ အရေပြားသာထိခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ကလျာတစ်ယောက် ပင်ပန်းလွန်းပြီး ဓားလွတ်ကျသွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူအုပ်ထဲမှ လူတစ်ယောက် အပြေးရောက်လာပြီး ကလျာ့ကို ရုတ်တရက် ပွေ့ချီကာ တိုက်ပွဲစည်းအပြင်သို့ ခုန်ထွက်သွားတော့သည်။
တိုက်ပွဲကို ရပ်ကြည့်နေသော ခေါင်းဆောင်ကြီး ရာဇာရဲ့ ညာလက်ရုံးဖြစ်သူ သီဟ တောက်တစ်ချက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ခေါက်မိသည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးကို လုပ်ကြံသွားတဲ့ ကောင်မလေးကို ကယ်တင်သွား
သူက ဘယ်လက်ရုံးဖြစ်သူ သူရ…။ ဒီကောင်မလေးကို သီဟ ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်က သေမင်းတောင်ကြားမှာ စွန့်ပစ်ထားခဲ့သော ကလျာဆိုသော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ဒီကောင်မလေး အခုထိ အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ သူရ မသတ်ပဲ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ပဲ ဖြစ်မည်။ အခုလည်း ကယ်ထုတ်သွားပြန်ပြီ။ သီဟတစ်ယောက် အံကိုခပ်တင်းတင်းကြိတ်ပြီး ငယ်သားများအားလုံးကို ခေါ်ဆောင်ကာ သူရနောက်ကို အပြင်းအထန် လိုက်တော့သည်။
သူရ ကလျာကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီး အလျင်အမြန် ပြေးလွှားနေသည်။ ညတစ်ဝက်လောက် ခရီးနှင်ပြီးရင် တောတောင်ထူထပ်တဲ့ သစ်တောကြီး တစ်ခုရှိသည်။ ထိုတောထဲသို့ ရောက်ပြီးလျှင် နောက်ကလိုက်လာတဲ့ ရန်သူတွေကို မျက်ခြေဖြတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သစ်တောရှိရာကို ရောက်ဖို့ လမ်းခုလတ်မှာ သေမင်းတောင်ကြားဒေသကို ဖြတ်ရမည်။
သူရ အားကုန်သုံးပြီး ပြေးသော်လည်း မြင်းခွာသံတွေက တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာချေပြီ။ သူရပြေးတော့လည်း မလွတ်တော့မဲ့အတူတူ တောအုပ်ဆီကို မသွားတော့ပဲ သေမင်းတောင်ကြားရှိရာ လမ်းသွယ်လေးဘက်ကို ချိုးကွေ့လိုက်သည်။ ခဏလောက် ပြေးပြီးတော့ ရှေ့မှာ ပြေးစရာ မြေမရှိတော့ပေ။ အသူတစ်ရာနက်လှသော ချောက်ကမ်းပါးက ဆီးကြိုနေသည်။ မြင်းခွာသံများက တစ်စထက်တစ်စ ပိုပြီးနီးကပ်လာသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူရ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချလိုက်ပြီး ပုခုံးပေါ်မှာ ထမ်းထားတဲ့ ကလျာကို အောက်ကိုချကာ ခပ်တင်းတင်းပွေ့ဖက်ပြီး သေမင်းတောင်ကြားထဲသို့ ခုန်ဆင်းလိုက်တော့သည်။
မြင့်မားလှသော အကွာအဝေးမှ ကျလာသည့် အရှိန်နှင့် အောက်မှ ရေပြင်ကို ထိလိုက်သော အချိန်တွင် သူရရော ကလျာပါ လောကကြီးနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး အမှောင်ကျသွားတော့သည်။
သူရ သတိရလာသည်။ မျက်လုံးကို အားယူပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကုန်းပေါ်တွင် ရောက်နေသည်။ တိတိကျကျပြောရလျှင် ကျောက်ဂူတစ်ခုထဲသို့ ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
” အစ်ကို သတိရလာပြီလား။”
သာယာသော အသံလေးကို ကြားရသည်။
”အော်… ကလျာလည်း အသက်ရှင်ရက် ရှိသေးတာပဲ။”
သူရစိတ်ထဲ တွေးမိခြင်း ဖြစ်သည်။ သူရ အသံလာရာကို ကြည့်လိုက်တော့ စိုးရိမ်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသော ကလျာကို တွေ့သည်။ သူရ လူးလဲထလိုက်ပြီး အနားမှာရှိနေသော ကလျာရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးပွေ့လိုက်သည်။
” ညီမရယ်… မသေကောင်း မပျောက်ကောင်းကွယ်။ ဟိုတစ်ခါထဲက အစ်ကိုပြောသားပဲ ကျားနက်စံအိမ်နဲ့ ဝေးဝေးနေပါဆိုတာကိုကွာ”
”ဘာပဲပြောပြော အစ်ကိုရယ်… ကလျာ့ဘဝမှာ အမုန်းဆုံး ရန်သူတော်ကြီးကို သွေးကြွေးဆပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကလျာ သေသွားမယ်ဆိုရင်တောင် သေပျော်ပါပြီ။”
သူရ ကလျာဆိုသော ကောင်မလေးကို မြတ်နိုးစွာကြည့်ရင်း ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်သည်။ ရေစိုနေသော အဝတ်အောက်မှ ဖွံ့ထွားသော ရွှေရင်အစုံကို ခပ်ရေးရေးလေး မြင်ရသည်။ သူရ အာခေါင်တွေ ခြောက်ကပ်လာသည်။ သူရတစ်ယောက် ကလျာ့ မျက်နှာကို ရီဝေဝေကြည့်ရင်း
“ချစ်တယ် ညီမရယ်။ အစ်ကို ညီမကို လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့တာပါ။ အစ်ကို့အချစ်ကို လက်ခံပါနော်။”
ကလျာလည်း သူမရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်အပေါ် မေတ္တာရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမဘဝက သူမချစ်သူအတွက် သန့်စင်မှုမရှိပါ။
”အစ်ကိုရယ်… ညီမဘဝက အစ်ကို့အတွက် မထိုက်တန်ပါဘူး အစ်ကိုရာ… ။ မချစ်ပါနဲ့နော်။”
”ညီမ မသေသေးဘူးဆိုတာသိလို့ အစ်ကို ညီမထွက်သွားတဲ့ နေရာမှာ အမြဲလိုလို လာစောင့်ခဲ့တာပါ ညီမရာ။ ခြောက်နှစ်လုံးလုံးပါပဲ။ ပြီးတော့ ရောက်လေရာ နေရာတိုင်း ညီမများ ရှိလေမလားဆိုပြီးတော့လည်း စုံစမ်းခဲ့ရတာ အမောပါပဲကွာ။ တွေ့မဲ့တွေ့တော့ ညီမက အစ်ကို့ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတာပဲလေ။ အစ်ကိုတို့ နှစ်ယောက် ဖူးစာပါလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ညီမ အစ်ကို့အချစ်ကို လက်ခံပြီး အစ်ကိုနဲ့ လက်ထပ်မယ် မဟုတ်လား။”
ကလျာတစ်ယောက် သူမအပေါ် ထားရှိသော သူရရဲ့ အချစ်ကို အဆုံးစွန်အထိ နားလည်လိုက်ပါပြီ။ သူရ အချစ်က ဖြူစင်စစ်မှန်သော အချစ်စစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သူမအသက်ကိုလည်း နှစ်ကြိမ်တိတိ ကယ်တင်ခဲ့သော သူရဲကောင်း ဖြစ်သည်။ အစစအရာရာ ပြည့်စုံသော သူရအချစ်ကို လက်မခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကလျာတစ်ယောက် သူရအချစ်ကို ခပ်သွက်သွက်ပင် လက်ခံလိုက်တော့သည်။
”ချစ်ပါတယ် အစ်ကိုရယ်… ။ ညီမ အစ်ကိုနဲ့ လက်ထပ်ပါ့မယ်။”
ကလျာ ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း ပြောမိသည်။ သူရ အပျော်လွန်သွားပြီး ကလျာ့မျက်နှာပေါ်သို့ အနမ်းမိုးတွေ ရွာချလိုက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူရအနမ်းတွေရဲ့ လားရာက ကလျာ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတစ်စုံဆီသို့ အနမ်းတွေ မရပ်မနားပေးပြီးတော့ ကလျာ့အဝတ်တွေကို အလျင်အမြန် ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
”အို့… အစ်ကိုရယ်… သိပ်ဆိုးတာပဲ။ ဒီမှာ ချမ်းနေပါတယ်ဆို။”
”အစ်ကိုက ညီမကို နွေးထွေးသွားအောင် လုပ်ပေးမလို့ပါကွာ။”
သူရ ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ကလျာ့ရင်သားထွားထွားကိုသာ အငမ်းမရပင် ငုံ့ပြီး စို့လိုက်သည်။ ကလျာ့ထံမှ တအင်းအင်းနဲ့ ညီးညူသံလေးများ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ရင်သားတစ်ဖက်ကို စို့နေရင်း ကျန်နေတဲ့ အခြားရင်သားကို လက်ကလည်း အအားမနေပဲ ဆုပ်ကာခြေသည်။ ကလျာ့ရင်သား ဖြူဖြူနုနုမှာ သူရလက်ရာတွေ ထင်ကုန်သည်။
သူရ တဖြည်းဖြည်း အောက်သို့ လျှောဆင်းလိုက်ပြီး ကလျာ့အဖုတ်ဝမှာ ထောင်ထောင်လေး ဖြစ်နေတဲ့ အစိလေးကို တစ်ချက် စုပ်လိုက်သည်။
ကလျာ တစ်ချက်ညည်းရင်း သူရဆံပင်တွေကိုသာ အားရပါးရ ဆုပ်ဆွဲထားသည်။ သူရ အတော်ကြာကြာ လျက်ပြီးတော့ အဖုတ်တစ်ခုလုံးလည်း စိုရွှဲနေပြီ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီး ရေစိုနေတဲ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တော့ ခေါင်းထောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ညီတော်မောင်က ပေါ်ထွက်လာသည်။ ညီတော်မောင်ကို ဂုတ်ကကိုင်ပြီးတော့ ကလျာ့အဖုတ်ဝမှာ လေးငါးဆယ်ချက်လောက် အစုန်အဆန် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ ကလျာ့ တင်ပါးအစုံက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှ ကြွတက်လာသည်။
သူရ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ညီတော်မောင်ကို ကလျာ့အဖုတ်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်လိုက်သည်။ အဖုတ်အတွင်းသားများက ညီတော်မောင်ကို တရွရွဆွဲညှစ်ခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုကြသည်။ ဆယ်ချက်လောက် ခပ်မှန်မှန်လေး လုပ်ပြီးတော့ ကလျာ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး အားရပါးရဆောင့်သည်။
“ဖွတ် … ဖတ်…. ဖွတ်… ဖတ်”
မြည်သံတွေနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်းရှုသံတွေက ကျောက်ဂူတစ်ခုလုံးမှာ ဆူညံနေသည်။ အချက်ငါးဆယ်လောက် ဆောင့်ပြီးတော့ဘကလျာ့ထံမှ အသံရှည် ညည်းသံကြားရပြီး ခြေဖျားတွေ ကွေးကောက်ကာ ငြိမ်သက်သွားသည်။ သူရလည်း အရှိန်ကိုမြှင့်ပြီး ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ မကြာခင်မှာပဲ ပြီးချင်လာသည်။
သူရ ပုခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ ခြေနှစ်ဖက်ကို ဘေးကိုခွဲကားလိုက်ပြီး ကလျာ့နို့ ဖြူဖြူဝင်းဝင်း နှစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆွဲ၍ဆောင့်သည်။ နောက်ဆယ်ချက်လောက် ဆောင့်အပြီးတွင်တော့ ကလျာ့အဖုတ်ထဲသို့ လိင်တန်ကိုတဆုံးသွင်းပြီး သုတ်များကို ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။
သူရတစ်ယောက် ကလျာ့ဘေးနားမှာ ဝင်လှဲလိုက်ပြီး ကလျာကို သူ့လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်စေသည်။
”ညီမ… အစ်ကိုတို့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ။ ချောက်ကမ်းပါးထဲမှာပဲ တစ်သက်လုံး နေကြမလား။ အပေါ်ကို ပြန်တက်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ ပြီးတော့ စားဖို့သောက်ဖို့လည်း ရှိသေးတယ်။”
”စားစရာအတွက်ကတော့ မပူနဲ့ အစ်ကိုရဲ့။ အစောက အစ်ကိုမေ့နေတုန်း ကလျာ ဒီနားတစ်ဝိုက်ကို ပတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ စားလို့ကောင်းတဲ့ အသီးတွေ ရှိတယ်။ အပင်တွေလည်း အများကြီးပဲ။ ပြီးတော့ ညီမတို့ကျလာတဲ့ ချောင်းထဲမှာလည်း ငါးတွေတွေ့တယ်။ ညီမတို့ ချောက်ထဲမှာပဲ နှစ်ယောက်ထဲ ကမ္ဘာလေးကို တည်ဆောက်ကြရအောင်နော်။ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား ဟင်။”
”ကောင်းတာပေါ့ ညီမရဲ့။ ပြီးတော့ အစ်ကိုကလည်း ညီမကို အစောင့်တွေ ဝိုင်းနေတုန်းက ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းထဲက အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်းကို ယူလာခဲ့တယ်။ ကိုယ့်တို့ သားသမီးလေးတွေ မွေးလာရင် အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်းကို သင်ပေးပြီး သိုင်းလောကထဲ ပြန်ဝင်ခိုင်းမယ်။ အများအကျိုး သယ်ပိုးတဲ့ သိုင်းသမားကောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြမယ်ကွာ။ ညီမရော ဘယ်လိုသဘောရလဲ။”
”ကဲ… အစ်ကို့သဘောအတိုင်းဆို နောက်ထပ်တစ်ခါလောက် ချစ်ကြရအောင်ကွာ။”
သူရ ခပ်မြန်မြန် ထလိုက်ပြီး ကလျာ့ပေါင်ကြားမှာ နေရာဝင်ယူလိုက်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သေမင်းတောင်ကြား ချောက်ကမ်းပါး အောက်ခြေရှိ ကျောက်ဂူလေးထဲမှာ ကြင်စဦး ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ရယ်သံလေးများကို ကြားရတော့သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 19,857
မရီးကို ဝင်လိုးခဲ့တယ် →